justfreeman: december 2009
ကမ္ဘာကြီးဟာ စီးပွားရေးကပ်ထဲက လူးလွန့်ရုန်းထနေရဆဲ၊ တချို့လည်းလွတ်ထွက်လာ၊ တချို့လည်းနစ်ဆဲ။ ဒီလိုအခါမှာ ဗမာပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးကတော့ ဘာမှထူးမလာ။ ဆန်ထွက်တွေကျ၊ အလုပ်လက်မဲ့တွေပိုများ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ပိုတက်ပြီး ပြည်သူတွေ ဒုက္ခဝဲထဲမှာ ချာလပတ်ရမ်းနေပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ နအဖက ပြည်သူလူထုအတွက် စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ လက်ဆောင်တခု ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ (၅,ဝဝဝ) တန်ငွေစက္ကူ။ နောက်ပြီးတော့ အခွန်နှုန်းတိုးမြှင့်တာ။ ဒီတော့ နအဖရဲ့ (၅,ဝဝဝ) တန်ကိုလည်းမယုံ၊ ဒေါ်လာအပေါ်လည်း မပုံရဲကြတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ တခြားနိုင်ငံများနည်းတူ ရွှေဈေး ထောင်တက်သွားပါတယ်။
တိုင်းပြည်တပြည်အနေနဲ့ပြောရရင် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်အတွင်း ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ အဖြစ်အပျက်တွေ အင်မတန်မှများခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်မှာ ကမ္ဘာက အာရုံစိုက်ရတဲ့၊ ကမ္ဘာမှာကြုံတောင့်ကြုံခဲ အဖြစ်အပျက်တွေပါ။ သတင်းစာဂျာနယ်တွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေမှာ မကြာခဏတွေ့ရတဲ့ သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲက ထိပ်ဆုံးထား ပြောသင့်တာကတော့ နိုင်ငံတကာခွင်က ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
နအဖက ယက်တောဒီပလိုမေစီ လမ်းကြောင်းဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေကို အမေရိကန်က လူရာသွင်း ဆက်ဆံဖို့ လုပ်လာတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဆီနေတာဂျင်ဝက်ဘ်၊ ဒု-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့တ်ကမ်ဘဲလ် စသဖြင့် ဝါရှင်တန်က လူတွေ ဗမာပြည်ကိုလာခဲ့ကြသလို ဗိုလ်သန်းစိန်အပါ ကြပ်ပြေးက စေလွှတ်သူတွေလည်း အမေရိကန်ကို ခြေချနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနှစ်ကို ဝါရှင်တန်နဲ့ ကြပ်ပြေး ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖောက်ဖို့ ကြိုပမ်းကြတဲ့နှစ်လို့ ပြောရင်တောင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းပေါက်သွား၊ အောင်မြင်သွားတယ်လို့တော့ ပြောမရသေးပါဘူး။ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ အရှေ့အာရှက ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီး နောက်ကျမကျန်ချင်တဲ့ အိုဘားမားအစိုးရဟာ ကြပ်ပြေးကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး ဆက်သွယ်ဖို့ အလေးအနက်လုပ်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုအထိ အနေအထားကိုပြောရရင် သမ္မတအိုဘားမားဟာ လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာ ပိတ်မိသလိုဖြစ်နေပြီး ပြန်ထွက်မရ၊ ရှေ့ဆက်တိုးမရဖြစ်နေပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့အပေါ် မစ္စတာအိုဘားမား အတွက်လွဲလေရော့သလား စဉ်းစားစရာတောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့တဆက်တည်းမှာပဲ ဗမာပြည်သားတယောက် အနေနဲ့ ကတော့ ဒီနှစ်ဟာ ဗမာပြည်ကို ကျွဲနှစ်ကောင်အကြားက မြေဇာပင် စဖြစ်စေတဲ့ နှစ်အဖြစ် သမိုင်းမဝင်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေ အခုလို နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းထဲကို တိုးဝင်လုံးပန်းတာနဲ့အမျှ ပြည်ပကယုံကြည်လာအောင် ပြည်တွင်းရေးမှာ ဟန်ပြလုပ်ငန်းတွေ၊ အများကြီး လုပ်လိမ့်မယ်လို့ တချို့ကမျှော်လင့်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ထင်သာထင် မဝင်ဘူးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ မူဆိုင်ရာကိစ္စတွေလို့ သူတို့သဘောထားတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ တပြားသားမှ လျှော့ပေးတာ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ သူတို့ဘက်က ပြတ်မြဲ ပြတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတို့ကိုတော့ ယင်တောင်အနားမခံပါဘူး။
ဒီ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ထဲမှာ လူတွေ မျှော်လင့်ထားပေမယ့် ပေါ်ထွက်မလာတဲ့အရာတခုကတော့ နအဖရဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဥပဒေနဲ့ တခြားဆိုင်ရာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေပါပဲ။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေကို အဝင်ခိုင်းမယ်၊ တနည်းအားဖြင့် လာမယ့်အစိုးရမှာ သူတို့ထဲက ဘယ်သူတွေကို တာဝန်ကြီးကြီးတွေပေးမယ် ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နအဖထိပ်သီးတွေ အကြားမှာ ဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်အောင် ဖြစ်နေတယ်လို့ အကဲခတ်တွေက ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်ထားတာထက် ပိုတွေ့ရတယ်လို့ ယူဆရတာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုသူတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်အောင် (နအဖကိုယ်စား) သဘောတရား ထုတ်ပေးနေသူတွေရဲ့ ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပကအထောက်အပံ့၊ နအဖအထောက်အပံ့ စတာတွေကို ဗြောင်ယူသူ၊ တိတ်တိတ်ယူသူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တတိယအုပ်စု၊ စတုတ္ထအုပ်စုလို့ ကြေညာနေသူတွေ၊ နအဖထီးရိပ်ကနေပြီး တခြားလူတွေကို တိမ်ပေါ်တက် စိန်ခေါ်မယ်လို့ ကျူးရင့်နေသူတွေ၊ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး သဘောတရားမျိုးစုံကို အမြှုပ်ထွက်မတတ်ပြောနေသူတွေ၊ စုံမှစုံပါပဲ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တလောလေးကပဲ နအဖသဘောထားတွေကို အငှားပါးစပ်နဲ့အော်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ကလူတွေကို လှိုင်သာယာမှာ ကြံ့ဖွံ့တွေက ဝိုင်းဆုံးမလိုက်ကြတယ်ဆိုတာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒါကတော့ နအဖအတွက် အငှားဗိုက်နဲ့ ဓားထိုးခံရတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံမှာက ဖော်လံဖားတိုင်းလည်း စားသာတာမဟုတ်ဘူးလို့ အရပ်ပြော ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ အဲဒီအရိုက်ခံရသူတွေရဲ့ နောက်ကျောက ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး အရာနိမ့်တာနဲ့များ ဆက်စပ်နေသလားလို့လည်း တွေးတောနေကြပါတယ်။
အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေအဖို့တော့ ဒီနှစ်ဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အစမ်းသပ်ခံရတဲ့ နှစ်လို့ဆိုရပါမယ်။ နှစ်ပါးသွားခန်းပြီးလို့ ဘီလူးခန်း ရောက်ပြီလို့ ပြောရမလားပါပဲ။ ဗကပလက်အောက်က အစောဆုံးခွဲထွက်ခဲ့တဲ့၊ အပစ်ရပ်ဇာတ်လမ်းကိုစတင်ခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်အဖွဲ့ကတော့ အစောဆုံးဇီဝိန်ချွေခံလိုက်ရပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်တယ်ဆိုတာ အကန့်အသတ်ရှိကြောင်း ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲမှာ အောင်နိုင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ နအဖ ခြေလှမ်းတုန့်သွားပါ တယ်။ ကျန်အပစ်ရပ်တွေကို ပေးထားတဲ့ ရာဇသံတွေ၊ နောက်ဆုံးရက်ဆိုတာတွေဟာ လျှော့လို့၊ ရွှေ့လို့ရတဲ့ဟာတွေလို့ ထင်မြင်လာရတဲ့အခြေကို ဆိုက်လာနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပအခြေအနေတွေဟာ နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ထင်တိုင်းလုပ်လို့ မရတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လို့ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုပဲ ကောလာဟလတွေကလည်း မိုးလုံးပြည့်ဆိုရမတတ် ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကောလာဟလ ဆိုတာ တကယ်ဖြစ်မလာတဲ့၊ မဟုတ်တဲ့သတင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ နအဖကတမင်လွှင့်တာ၊ တချို့ နအဖကို မကြိုက်သူတွေက တမင်လွှင့်တာ၊ သာမန်လူက မရည်ရွယ်ဘဲလွှင့်သလိုဖြစ်သွားတာ၊ အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာ ပွင့်လင်းမှုမရှိလို့ ကောလာဟလတွေ ဒါလောက်တောင်များနေ၊ ပျံ့နေတာလားလို့ တွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။ အလွယ်ပြောရင်တော့ “ဒါကိုက ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးပဲလေ” ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီကုန်လွန်တဲ့နှစ်မှာ အခုပြောခဲ့သလို ကိစ္စဆိုးတွေချည့်လို့ ပြောရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်က ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာ ပြည်သူတွေအတွက် အားရစရာခြေလှမ်းဖြစ်သလို အတိုက်အခံတွေ အတွက်လည်း အချင်းချင်းတွဲလုပ်လို့ရတဲ့ အခြေခံတခုရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်ကို ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ ဆိုတာဟာ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ၊ လူတဦးချင်းတွေကို စမ်းသပ်တဲ့ မှတ်ကျောက်တခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ ဒါဟာ နအဖစစ်အစိုးရအတွက်လည်း တမင်မျက်နှာလွှဲနေ၊ မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်နေရတဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒ သတိပေးမှတ်တိုင်တခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့တဆက်တည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ အားတက်စရာအပြောင်းအလဲတချို့လည်း တွေ့လာ ရပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်ဆိုတဲ့ မုချ ပိုမိုကြမ်းတမ်းမယ့်လမ်းကို ဖြတ်သန်းဖို့အတွက် ဂီယာပြောင်းတာ၊ ကားဆရာပြောင်းတာတွေ တွေ့ရတာဟာလည်း ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။
ဒီ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုကတော့ (၅,ဝဝဝ) တန်ငွေစက္ကူနဲ့ ထောင်ထဲမှာသေဆုံးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား (၃) ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော်နဲ့ နေပြည်တော် ပုံမှန်ဆက်ဆံမှုတည်ဆောက်ရေးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အမှတ်သင်္ကေတကတော့ ဘောဂဗေဒ ပညာရှင် မစ္စတာစတစ်ဂလစ်ဇ်က “ဗမာပြည်အဖို့ အခုအချိန်ဟာ အပြောင်းအလဲတခုအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ” လို့ ပြောခဲ့တာနဲ့ အဲဒါကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ နအဖစစ်အစိုးရက ဒေါ်လာသန်း (၆ဝဝ) ဖိုးခန့် စစ်လေယာဉ်တွေ ဝယ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by justfreeman at 12:402comments
Posted by justfreeman at 12:360comments
Posted by justfreeman at 12:330comments
Posted by justfreeman at 12:040comments
Wednesday, 30 December 2009 14:24 ရန်ပိုင်
.အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအား နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဒီဇင်ဘာလကုန် နောက်ဆုံးထား အကြောင်းပြန်ရန် သတိပေးထား သော်လည်း လက်ရှိအခြေ အနေတွင် အချိန်ကာလ ထပ်မံတိုးချဲ့ သတ်မှတ်နိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း နိုင်ငံရေး အကဲခတ်များက ပြောဆိုနေကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက SSA-N အဖွဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းမည့် လူစာရင်းကို စစ်အစိုးရထံသို့ ပေးပို့ခဲ့သော်လည်း အဓိကပါဝင်မည့် လူဦးရေနှင့် လက်နက်စာရင်းမှာ နည်းပါးလွန်းသည့်အတွက် စစ်အစိုးရက မကျေနပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 11:340comments
မြန်မာ အလုပ်သမားများ အတွက် အဆင့်မြင့် ပညာသင်ကျောင်း ချင်းမိုင်တွင် ဖွင့်မည်
Wednesday, 30 December 2009 16:04 ၀ါးရှီးဖော
.ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌ မြန်မာ အလုပ်သမားများ အတွက် အဆင့်မြင့် ပညာသင်ကြား နိုင်ရန်နှင့် ကိုယ်ပိုင် အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်ရန် အတွက် Bridging Educational Access to Migrants (BEAM) အမည်ရှိ သင်တန်း ကျောင်းကို လာမည့် ဇန်ဝါရီ လဆန်းပိုင်းတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်သည်။
ယင်း သင်တန်း ကျောင်းတွင် ပေါင်းကူးပညာရေး (Bridging course) နှင့် အသက်မွေးမှု ပညာရပ်များကို သင်ကြား သွားမည်ဟု သိရသည်။
Bridging course တွင် အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ စာပေနှင့် အနုပညာ၊ လူမှုရေး ဘာသာ၊ သိပ္ပံဘာသာနှင့် (GED) ပညာရေးများ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး သက်မွေးမှု ဘာသာ ရပ်များတွင် ၀ဘ်ဒီဇိုင်း တည်ဆောက်ခြင်းများ၊ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်နှင့် ပတ်သက်သော ပညာရပ်နှင့် အပ်ချုပ် သင်တန်းများ ပါဝင်မည်ဟု ဦးသိန်းဝင်းက ပြောသည်။
Bridging course အတွက် သင်တန်းချိန် ၂ နှစ်ကြာမည့် ဖြစ်သည်။ ပထမနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ စာပေနှင့် အနုပညာ၊ လူမှုရေး ဘာသာနှင့် သိပ္ပံ ဘာသာရပ်များကို သင်ကြား ပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယနှစ်တွင် (GED) အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် သင်ရိုးစာအုပ်များကို တိုက်ရိုက် သင်ကြားပို့ချမည် ဖြစ်သည်။ ဘာသာရပ် အားလုံးကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် သင်ကြားမည် ဖြစ်သည်။
“တချို့လူတွေက အထက်တန်း ကျောင်းတက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်လာတယ်။ တချို့ကလည်း တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ် တက်ပြီး ဒီဘက်ကို ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့ အခါကျတော့ သူတို့ အထက်တန်း ပညာနဲ့ တက္ကသိုလ်ပညာ ဆက်တက်နိုင်ဖို့ ကလိုနေတယ်။ အခုလို လိုအပ်လို့ ဆရာတို့တွေ တိုင်ပင်ပြီး ဒီကျောင်းကို ဖွင့်ဖို့ စဉ်းစားလိုက်တာ” ဟု ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းဝင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သင်တန်းချိန်ကို နံနက် ၈နာရီမှ နေ့လယ် ၁၁နာရီအထိ တချိန်၊ ညနေ ၅နာရီမှ ည ၈နာရီအထိ တချိန် ဟူ၍ ၂ ချိန် သတ်မှတ်ထားပြီး Bridging course အတွက် စုစုပေါင်း သင်တန်းသား ၄၀ တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ထိုင်နိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ရှိ မြန်မာ အလုပ်သမားများ အတွက် အခြေခံပညာ အဆင့် သင်ကြားပေးသည့် သင်တန်း ကျောင်းသာရှိပြီး အထက်တန်း ပညာနှင့် တက္ကသိုလ်ပညာ ဆက်လက် သင်ကြားရန် ဆန္ဒရှိသော ကျောင်းသားများ အတွက် အဆိုပါကျောင်း ဖွင့်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးသိန်းဝင်းက ပြောသည်။
“မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် ပိုက်ဆံ အများကြီးပေးမှ တက်ခွင့်ရတယ်လေ။ အခု ဒီလိုမျိုး အခွင့်အရေးတွေ ရတဲ့အတွက် အရမ်း ၀မ်းသာပါတယ်။ အခုလို့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေကို အမြင် ကျယ်လာအောင် ကူညီပေးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရှိတဲ့ အတွက်လည်း အရမ်းပီတိ ဖြစ်တယ်” ဟု Bridging course တက်ရန် စိတ်ဝင်စားနေသော ချင်းမိုင်ညဈေးရှိ စားသောက်ဆိုင်တ ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် လီဆူး တိုင်းရင်သား ကိုအလေးက ပြောသည်။
Posted by justfreeman at 11:310comments
ရိုဟင်ဂျာ ၉၀၀၀ ပြန်ခေါ်ရန် စစ်အစိုးရ သဘောတူ
Wednesday, 30 December 2009 18:07 ဧရာဝတီ
.ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ဒုက္ခသည် စခန်းများရှိ ရိုဟင်ဂျာ ၉၀၀၀ ခန့်ကို မြန်မာ စစ်အစိုးရက ပြန်လည် လက်ခံရန် သဘောတူညီကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းအစီအစဉ်မှာ ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့နှင့် ယနေ့ အပါအ၀င် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့ ၂ ရက်ကြာသွားရောက်သည့် မြန်မာ ဒု နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးမောင်မြင့်၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ လာသော သတင်းများ က ဆိုသည်။
ယခု ပြန်လည် လက်ခံမည့် ရိုဟင်ဂျာများမှာ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်အနီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရှေ့တောင်ပိုင်း ကောက်စ် ဘဇား ခရိုင်အတွင်းရှိ ကုတုပလောင်း ဒုက္ခသည် စခန်း နှင့် နာရာပရ ဒုက္ခသည် စခန်းများမှ ဖြစ်ပြီး ယင်းဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ရိုဟင်ဂျာ ၃၀၀၀၀ ၀န်းကျင် ရှိကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မိုဟာမက် မီဂျာယူလ် ကာရက်စ် ကို ကိုးကား၍ Reuters သတင်းတရပ် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“မကြာခင် ဒီအစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ဖို့ရှိပါတယ်”ဟု ဦးမောင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က ပြောကြောင်းလည်း သတင်းတွင် ပါရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရိုဟင်ဂျာများ ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလ လယ် ကပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးက သတင်းထောက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြား ထားသည်။
ရခိုင်လုပ်ငန်း စီမံချက် (Arakan Project) ညှိနှိုင်းရေးမှူး ခရစ္စ လေးဝါးက“အခုပြန်ပို့မယ့် ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာ သူတို့ ဆန္ဒအလျောက် ပြန်မယ့် သူက နည်းပါတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ယင်း ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာသည် ၁၉၉၁-၁၉၉၂ ခုနှစ်များ ကာလက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးသွားသည့် ရိုဟင်ဂျာ ပေါင်း ၁ သန်းကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
၎င်းရိုဟင်ဂျာများသည် စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများ၊ အဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုများ၊ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲဖြစ်၍ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်မှုများကြောင့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်မှ လှေများဖြင့် ထွက်ခွာလာကြခြင်း ဖြစ်ပြီး အများစုက မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိရေးအတွက် ရည်ရွယ်ထားကြသည်။ သို့သော်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ကမ်းစပ်များတွင် သောင် တင်ခဲ့ကြသူများသည်။
ရိုဟင်ဂျာများအရေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နေသော ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်သည့် ရခိုင်လုပ်ငန်း စီမံချက် (Arakan Project) ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂ နှစ် အတွင်း ထိုင်းပင်လယ် ကမ်းခြေသို့ ရိုဟင်ဂျာ ၈,၀၀၀ ထက် မနည်း ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by justfreeman at 11:280comments
ဝ အရေး နောက်ဆုံးရက် နီးကပ်လာ၊ ဆွေးနွေးမှု မရှိသေး
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၉ မိနစ် .
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ စစ်အစိုးရက အပစ်ရပ် ဝ အဖွဲ့ UWSA အား နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းလဲရေးကို ယခုလကုန် နောက်ဆုံးထား ဆုံးဖြတ်ရန် ပြောထားသော်လည်း ယနေ့ထိ နှစ်ဖက် ဆွေးနွေးပွဲများ ထပ်မံပြုလုပ်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း နီးစပ်သူများထံမှ သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့ အခြေစိုက် ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ခိုင်ဇော်နှင့် စရဖ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းထွန်းရီတို့က ဝ နယ်မြေကို ဖြတ်၍ တရုတ်နယ်စပ် လန်ချန်းမြို့တွင် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကိစ္စများ ဆွေးနွေးရန် ထွက်ခွာမှုသာရှိသည်ဟု တရုတ်နယ်စပ် အခြေစိုက် စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇော်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယခင်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် နအဖ စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေး အကြီးအကဲ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၊ ရမခ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် အောင်သန်းထွဋ်၊ ကစထမှူး မင်းအောင်လှိုင်တို့ ပါဝင်သောအဖွဲ့နှင့် ဝ တပ် နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု ပါတီဖြစ်သော ဝ ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP မှ ဒု- ဥက္ကဌ ပေါဝ်းယျိုလျှန်၊ ဒု-စစ်ဦးချုပ် တာ့အိုက်လွန်း ပါဝင်သောအဖွဲ့တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ရာမှ သဘောတူညီချက်မရသဖြင့် တပ်တွင်း ထပ်မံ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ယခုလကုန်အထိ အချိန်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နအဖ ဖက်က လိုလားသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းပုံတွင် တပ်ရင်းတရင်းအတွက် တပ်သားဦးရေ ၃၂၆ သာ ထားရှိစေလိုပြီး ထိုအထဲတွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ စစ်သား ၃၀ ဦးကို ထည့်သွင်းမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဝ တပ်ဖွဲ့ကမူ အချက် ၉ ချက်တင်ပြထားပြီး နအဖ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပါ “ ဝ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း” အတွင်း ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းပေါက်၊ မိုင်းဖျင်၊ ဝမ်ဟုန် ဒေသများကို ထည့်သွင်းပေးရန်လည်း ပါဝင်သည်။
တပ်အသွင် ကူးပြောင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်ရင်းကို အခြေခံသည့် ဝမ်ဟုန်နှင့် ပန်ခမ်း စစ်ဒေသခွဲ ၂ ခုဖွဲ့ရန် တင်ပြထားသည်။ ယင်းစစ်ဒေသခွဲများတွင် စစ်ဒေသတပ်မှူး အပါအဝင် ထိပ်ပိုင်းတပ်မှူးနေရာ ၁၄ နေရာအနက် ဝ တပ်ဖွဲ့က ၁၀ နေရာ တောင်းထားပြီး နအဖ အတွက် ၄ နေရာသာ သတ်မှတ်ထားသည်။
စစ်ဒေသခွဲများ၏ “ထောက်ပံ့ရေး၊ ကျန်းမာရေး အာမခံခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး နည်းပြများကို အဓိကအားဖြင့် တပ်မတော်မှ တာဝန်ယူရန်နှင့် ဝ တပ်ဖွဲ့မှ ပေါင်းစပ်သွားရန်” တင်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် တပ်ရင်းအဆင့်နှင့် လက်အောက် ကေဒါအရာရှိများ၊ တပ်သားများအား ဝ တပ်ဖွဲ့မှသာ တာဝန်ယူသွားမည် ဖြစ်ပြီး “တပ်မတော်မှ စေလွှတ် ခန့်အပ်ခြင်း မလိုတော့ကြောင်း” လည်းပါရှိသည်။
အသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်တွင်လည်း တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၃၀၀၀ ခန့် ကျန်ရှိဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဌာန အသီးသီးမှ ကျန်မည့် အင်အား ၅၀၀၀ ကျော်လည်း ရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့အား ၅ နှစ်စာ ပင်စင် စားရိတ်များကို တကြိမ်တည်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရန် အချက် ၉ ချက်အတွင်း ထည့်သွင်းထားသည်။
ဝ တပ်ဖွဲ့တွင် လက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ် အင်အား ၂ဝဝဝဝ ကျော်ရှိသဖြင့် ၎င်းတို့အား စိစစ်ပြီး “ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့” တဖွဲ့ဆက်လက်ထားရှိရန် ဖော်ပြသည်။ အသွင်ကူးပြောင်းပြီးနောက် ဝ နယ်ဒေသ အတွင်းရှိ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်မဆို ဥပဒေကျူးလွန်မှု နောက်ထပ်မရှိလျင် ၎င်းတို့၏ လုံခြုံမှုကို စစ်အစိုးရက အပြည့်အဝ အာမခံပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားသည်။
နအဖ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ညှိနှိုင်းမှုအဆင်မပြေသည့်နောက်ပိုင်း ဝ တပ်ဖွဲ့များ စစ်ရေးတိုးချဲ့ပြင် ဆင်သည့် သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
နအဖ ဘက်ကမူ မကြာသေးမီက လာလည်သော တရုတ် ဒုသမ္မတ ရှီကျင်းဖျင် (Xi Jinping) အား နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြတ်သွားမည့် အရှည် ၇၇၁ ကီလိုမီတာရှိ ရေနံ ပိုက်လိုင်းတလျှောက် လုံခြုံရေး ယူပေးမည်ဟု မြန်မာအာဏာပိုင်များက အာမခံခဲ့သည်။
UWSA သည် ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ - ဗကပ မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ခွဲထွက်၍ ထိုနှစ်အတွင်း စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်စဲခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရက အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် ယခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 11:250comments
Labels: မဇ္စိုမ သတင်းမှ
ဝန်ကြီးဌာန မပြန်သော ဘောလုံးသမားများ အငြိမ်းစားပေးမည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၆ မိနစ် .
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် - MNL တွင် ကစားနေသော ဝန်ကြီးဌာနအောက် ဘောလုံးသမားများအနေဖြင့် သက်ဆိုင် ရာဌာနများသို့ မပြန်လာပါက အငြိမ်းစားပေးခံရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်မည်ဆိုပါက လာမည့်နှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အကြောင်း ကြားရမည်ဖြစ်သည်။
“ဝန်ကြီးဌာန ကစားသမားတွေကို ခေါ်ထားမယ်ဆိုရင် စာရင်းပို့ပေး။ သူတို့ဆီမှာ ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် လည်း လက်ခံမယ်။ ထွက်မယ်ဆိုရင် စာရင်းပို့။ အငြိမ်းစား လုပ်ပေးမယ်။ အဲလိုမျိုး။ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ကနေတဆင့် အကြာင်းကြားလာတာပါ” ဟု ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် YUFC မန်နေဂျာ ဦးအောင်ကျော်လွင်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
MNL ရှိ ဘောလုံးအသင်း ၈ သင်းမှ ဘောလုံးသမားများထဲတွင် ဘဏ္ဍာအခွန်၊ စီးပွားကူးသန်း၊ ပို့ဆောင်
ဆက်သွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်၊ ပြည်ထဲရေး၊ မီးရထား အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများလည်း ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းဝန်ထမ်းများမှာ ယခင်က ဝန်ကြီးဌာနကလပ်အသင်းများ၌ ကစားနေကြသူများဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် စတင်သည့် MNL သို့ ပြောင်းလဲကစားလာကြခြင်းဖြစ်သည်။
၂ နှစ်တာကာလ ကစားခွင့်ပြုမည်ဟု ယခုနှစ် အစပိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများထံမှ အလွတ် သဘော ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့သော်လည်း ယခုတနှစ်သာရှိသေးချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ အကြောင်းကြားလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဝန်ကြီးဌာနများမှ အကောက်အခွန်မှူး၊ ဦးစီးအရာရှိ စသည့်ရာထူးအဆင့် ကစားသမားများလည်း ပါဝင်ပြီး ကလပ်အသင်းတွင်ဆက်နေရန် (သို့) ဌာနသို့ပြန်ရန်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး အသင်းနှင့် ကစားသမားများ အကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကစားသမားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေတုန်းရှိသေးတယ်။ ကျနော်တို့စီမှာကတော့ ၃ သိန်းကနေ ၁ဝ သိန်းအထိရ မှာပေါ့။ သူတို့ဌာနမှာတော့ ရာထူးလစာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရမှာပေါ့။ ဦးစီးအရာရှိဆိုရင် ၈ သောင်း အဲလိုမျိုးသူ့အဆင့်နဲ့သူ ရကြတာပဲ” ဟု ဦးအောင်ကျော်လွင်ကပြောသည်။
အသက် ၃ဝ အထက် ကစားသမားများအနေဖြင့် ဌာနတွင်ပြန်လည်တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီး ကစားအားရှိသည့် လူငယ်ကစားသမားများအနေဖြင့် ဝင်ငွေကွာဟမှုကြောင့် ဌာနသို့ ပြန်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း အားကစားကလောင်ရှင် ဦးခင်မောင်ထွေးက ခန့်မှန်းပြောသည်။
“၄-၅ နှစ်လောက် ကစားနိုင်မယ့်လူဆိုရင် သူတို့က ဒီမှာတနှစ်ဆို ကျပ်သိန်း ၁ ရာဝန်းကျင်လောက် ရနေ တာပဲဗျာ။ သူတို့ဌာနဆိုင်ရာမှာ မရနိုင်ဘူး။ ဟိုဘက်မှာလည်း အငယ်တန်းအရာရှိတို့ ဘာတို့ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ဌာနဆိုင်ရာ ပြန်ကြမှာပေါ့” ဟု ဦးခင်မောင်ထွေးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
MNL တွင် လက်ရှိ အသင်း ၈ သင်းဖြင့် ကစားနေကြပြီး မန္တလေးတိုင်း ကိုယ်စားပြု ရတနာပုံအသင်းက ယခုနှစ် MNL ဖလားဆွတ်ခူးနိုင်ရန် ၁၁ ပွဲကစားအပြီး ဇယားထိပ်ဆုံး၌ ရပ်တည်နေလျက်ရှိသည်။
မြန်မာ့ဘောလုံးအား အပျော်တမ်းမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စနှစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့နှင့် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့များက နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သိန်းစိန်ထံမှ သွားရောက်ခွင့်တောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် လက်ရှိဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်က Myanmar National League ဟု အမည်ပေးကာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိတ်ကို ယခုနှစ်တွင် စတင်၍ ဖော်ဆောင်လာခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 11:220comments
Posted by justfreeman at 14:170comments
Posted by justfreeman at 10:060comments
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉
စစ်မှန်တဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ဒီရေလိုမျိုးပဲ အတက်အကျ မြန်မြန်ကြီးကို ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုရက်ပိုင်း ပြောင်းလဲမှုထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ထူးခြားမှုလေးတွေက နောက်ပိုင်း စီးပွားရေးသမားတွေ ကြုံတွေ့ရတော့မယ့် အနာဂတ်လားလို့ တွေးတောစရာပါ။
စစ်အစိုးရက သူတို့ကိုယ်တိုင် သွင်းကုန်အစားထိုးမူဝါဒနဲ့ ယနေ့အချိန်ထိ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းတွေကို ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဖို့ ဗြုန်းစားကြီး အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ ကျပ်သိန်းထောင်ချီ လည်ပတ်နေတဲ့ ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေခမျာ ဘယ်သူ့ကို အဖေခေါ်ရမှန်းမသိတော့ဘဲ နိုင်ငံတွင်း အမှိုက်တွေ စုပုံအောင်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းအောင်နဲ့ လူတွေကို ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်စေအောင် လုပ်ဆောင်တဲ့ နံပါတ် (၁) ရန်သူတွေ နေ့ချင်းညချင်း ဖြစ်သွားကြတာပါ။
ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ရင် သူတို့ဟာ အရင်ကတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ သွင်းကုန်အစားထိုးရေးစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကို ချွေတာပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအကျိုးပြု စီးပွားရေးသမားတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်ကာလ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် အကြာမှာတော့ သူတို့ဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ အာဏာနဲ့ တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့ နိုင်ငံကို အနှောင့်အယှက်ပေးသူများ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။
ဒီနှစ်ပိုင်းမှာ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်၊ ပုဂံနဲ့ ရန်ကုန်တို့မှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်သုံးစွဲမှု တားမြစ်တာ၊ ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ခိုင်းတာတွေ လုပ်လာပါတယ်။ ဒီမှာ တခုတွေ့ရတာက ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို စစ်အစိုးရကိုယ်နှိုက်က သွင်းကုန်အစားထိုး မူဝါဒအရ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက စပြီး ပလတ်စတစ်စက်ရုံများ တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပကနေ ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်း ကော်စေ့တင်သွင်းပြီး ပြည်တွင်းမှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အပါအ၀င် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ထုတ်လုပ်စေတာပါ။
အဲဒီအချိန်ကစလို့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အစားအသောက်ထုပ်ပိုးတဲ့ သတင်းစာစက္ကူတို့လို၊ ဖက်တို့လို ဆွေးမြေ့လွယ် ထုတ်ပိုးပစ္စည်းတွေ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဈေးပေါပေါနဲ့ အလွယ်တကူရတဲ့ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေက အစားထိုး ၀င်ရောက် လာပါတယ်။ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ယဉ်ကျေးမှုဟာ ဈေးခြင်းတောင်း အစ၊ အစားအစာထုပ်ပိုးမှု အလယ်၊ နောက်ဆုံး မိုးရွာရင်တောင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ် ခေါင်းပေါ်မိုးပြီး သွားလာတဲ့အထိ မြန်မာ့လူမှုဘ၀မှာ တွင်ကျယ်လာခဲ့တာပါ။
စစ်အစိုးရက ဒီလို ဆွေးမြေ့ဖို့မလွယ်တဲ့ ပလတ်စတစ်တွေ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုထားပေမယ့် ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လို သိမ်းဆည်းမယ်ဆိုတဲ့ စနစ်ကောင်းကောင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ နောက် မြို့ကထွက်တဲ့ အမှိုက်ကို သိမ်းရာမှာ၊ စွန့်ပစ်ရာမှာလည်း အမှိုက်ပုံနေရာသတ်မှတ်ပြီး စုပုံစွန့်ပစ်တဲ့ စနစ်ကို သုံးပါတယ်။ ဒီအမှိုက်ပုံကိစ္စကြောင့် မြေသားကြံ့ခိုင်မှုမရှိတော့ဘဲ အခု နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ ရန်ကုန်မြို့မှာ အဆောက်အအုံတွေ မြေကျွံကျမှုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့တော်တွေဟာ မိုးတွင်းကာလရောက်တာနဲ့ လမ်းတွေ ရေအပြည့်ပါ။ ရေနုတ်မြောင်းတွေဟာ စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်တဲ့ ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေ အပါအ၀င် တခြားအမှိုက်တွေနဲ့ ပိတ်ဆို့ပြီး မိုးများရွာပြီဆိုရင် လမ်းပေါ်မှာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အမှိုက်တွေ ပြည့်ကုန်တော့တာပါပဲ။ နောက်ဆက်တွဲကိစ္စက မူလကတည်းက ခနော်နီခနော်နဲ့ လမ်းတွေ မိုးတမိုးလောက်ရွာလိုက်ရင် ချိုင့်ခွက်တွေဖြစ်ပြီး ပျက်စီးကုန်တာပါ။ အဲတော့ စည်ပင်-လမ်းတံတားဌာနက သံပုံးလေး၊ ဒယ်ပြားလေးနဲ့ လမ်းကို အဖြစ်ဆိုရုံလေး ဖာထေးလိုက်နဲ့ တနှစ်စာ အလုပ်နဲ့ လက်နဲ့ မပြတ်တော့တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ရန်ကုန်က စလိုက်တဲ့ ၀မ်းရောဂါဟာ တနိုင်ငံလုံး ပြန့်လာတဲ့အတွက် မီဒီယာအသီးသီးက ထောက်ပြပြောဆိုမှု တွေကို ဆင်ခြေပေးစရာမရှိဘဲ စစ်အစိုးရအတွက် ခေါင်းခဲစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီပြဿနာကို ဒီနှစ်ပွင့်လင်းရာသီမှာ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ သူတို့ အကောင်အထည်ဖော်ရပါတယ်။
ဒီမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာက မြို့တော်တွင်း ရေစီးရေလာ ကိစ္စတခုတည်းအတွက်ကို မြို့တော်တွင်း တန်ချိန် သိန်းချီ စုပုံနေတဲ့ အမှိုက်ပြဿနာကို မဖြေရှင်းတတ်၊ မဖြေရှင်း နိုင်တော့ ဒီလို ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေ စုပုံနေတာဟာ ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့်၊ ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုကြောင့်လို့ တာဝန်မဲ့ စွပ်စွဲလိုက်တာပါ။ စွပ်စွဲရုံတင်မကပါဘူး ပြည်သူလူထုရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ တရားဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အာဏာနဲ့ ပိတ်ပင်လိုက်တာပါ။
သိန်းထောင်ချီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး လူဦးရေ (၂) သောင်းလောက်ကို အလုပ်ပေးထားရတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ပိတ်သိမ်းခိုင်းလိုက်တာပါ။ တချိန်တည်းမှာပဲ ရောင်းရေးဝယ်တာ ကိစ္စတွေမှာလည်း ထုပ်ပိုးမှုအတွက် အခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီမှာတင် ရပ်မသွားပါဘူး။ ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတွင်း စုပုံနေတဲ့ ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေကို ပြန်ပြီး သိမ်းပေးရမယ်လို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ပလတ်စတစ် ရီဆိုက်ကယ်လုပ်ဖို့ စက်ရုံတွေ တည်ထောင်ရမယ်။ အမှိုက်ပုံတွေကနေ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်တွေ ရွေးထုတ်ရမယ့်၊ သန့်စင်ရမယ့်၊ ပြန်သိမ်းပေးရမယ့် ကုန်ကျစရိတ်က သိန်းထောင်ချီကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာ ထောက်ပြချင်တာက ဒီလိုအမှိုက်တွေ စုပုံတာဟာ ပလတ်စတစ် ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ အပြစ်ပဲလား။ ဒီပလတ်စတစ် ထုတ်လုပ်မှုတွေ ခွင့်မပြုခင်က ရီဆိုက်ကယ်ကိစ္စကို ဘာကြောင့် ထည့်သွင်းမစဉ်းစားခဲ့ပါသလဲ။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့တွေက ထောက်ပြပြောဆိုတာ၊ စာတမ်းရေးသားတာ ဒါတွေကိုလည်း စစ်အစိုးရက လျစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်။ အခု မရှူနိုင်မကယ်နိုင် ဖြစ်လာတော့မှ ဒါဟာ ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်သူတွေ အပြစ်လို့ ပုံချလိုက်တာပါ။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်ကို စည်းမျဉ်းဥပဒေနဲ့မဟုတ်ဘဲ စစ်အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းပါ။
အမှိုက်တွေ ဒီလောက်ပုံနေအောင် စည်ပင်သာယာအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်အတွင်းမှာ ဘာတွေလုပ်နေခဲ့ပါသလဲ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးက နောက်ပိုင်း မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အများအပြား ဖြစ်ပေါ်လာဦးမယ့် အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုကိစ္စက အမှိုက်ကိစ္စပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အမှိုက်တွေစုပုံတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်လို့ လက်ညှိုးထိုး အပြစ်ပုံချတဲ့ စစ်အစိုးရဟာ နောက်ထပ် ဘယ်လိုပြစ်မှုတွေကို စီးပွားရေးသမားတွေကို ပုံချဦးမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရနေပါပြီ။
ဒီပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းခိုင်းပြီး အမှိုက်သိမ်းခိုင်း လုပ်နေတာမှ မကြာသေး စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း တရားမ၀င် ရွှေတူးလို့ ကျေးရွာတွေ လယ်တွေပျက်လို့ဆိုပြီး ရွှေတူးတဲ့ ကုမ္ပဏီ (၂) ခုကို နာမည်ပျက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွှေကုမ္ပဏီတွေကတော့ အကျိုးအမြတ်ရသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာပြောစရာက နိုင်ငံအတွင်း အပ်ကျတာက အစ ဗုံးခွဲတာ အဆုံး သူတို့ မသိတာမရှိတဲ့ စစ်အစိုးရက ရွှေတွင်းတွေ တရားမ၀င် တူးပြီး၊ ရွှေရှာပြီး ရွာတွေ ပျက်စီးသွားပြီးမှ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို အရေးယူတယ်ဆိုတာကတော့ အရပ်စကားနဲ့ ပြောရရင် လုပ်စားတာသက်သက်ပါ။
နောက်ပိုင်း စီးပွားရေးသမားတွေ ကြုံတွေ့ရဦးမယ့် ပြဿနာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အပြစ်ပုံချခံရမယ့်ကိစ္စတွေ အများအပြား ရှိပါသေးတယ်။ လှိုင်မြစ် ရေထုညစ်ညမ်းလာတာ၊ တောင်သမန်အင်း ငါးမျိုးစိတ်တွေ မျိုးတုံးပြီး ရေထုညစ်ညမ်းနေတာ၊ ဧရာဝတီ သောင်ထွန်းလာတာ၊ ဖားကန့် - လုံးခင်း - မိုးကုတ်မြို့တွေ ကျောက်တွင်းတွေ တူးလို့ ပျက်စီးနေတာ၊ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းအတွင်း ရွှေတူးလို့ ရွာတွေ လယ်တွေ ပျက်စီးတာ စသဖြင့် … စသဖြင့် … အတောမသတ် ပျက်စီးနေမှုတွေ ဒါတွေဟာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ကြသူများကြောင့် သက်သက်လို့ လက်ညှိုးထိုး အပြစ်ပုံချလာတော့မှာလား စောင့်ကြည့်ကြရတော့မှာပါ။ ။
Posted by justfreeman at 10:020comments
Tuesday, 29 December 2009 18:40 သဲသဲ
.အလှူ၊ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားများတွင် ငှားရမ်း အသုံးပြုလေ့ရှိသော မြန်မာ့ ဆိုင်းဝိုင်းများတွင် ကီးဘုတ်အပါအ၀င် အနောက်တိုင်း တူရိယာ ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်း တီးမှုတ်ခြင်း မပြုရန် မြန်မာနိုင်ငံ သဘင်ပညာရှင်များ အစည်းအရုံး (ဗဟို) က ထုတ်ပြန် လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by justfreeman at 09:520comments
ပထမဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင် ပြိုင်ကားများ အရည်အသွေးညံ့
မြန်မာ့ပထမဆုံး ပြိုင်ကား မောင်းပြိုင်ပွဲကွင်း မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
Tuesday, 29 December 2009 16:12 ဟိန်းဇော်
.မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ပြိုင်ကား မောင်းပြိုင်ပွဲတွင် အသုံးပြုသည့် ပြိုင်ကားများ၏ စက်အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် အရည်အချင်းရှိ ပြိုင်ပွဲဝင်များ ဆုနှင့် လွဲချော်ခဲ့ရသည်ဟု ပြိုင်ကား ကျွမ်းကျင်သူတို့က သုံးသပ် ကြသည်။
အဆိုပါ Galaxy ပြိုင်ကားမောင်း ပြိုင်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသည့် ကားအစီးရေ ၂၀ အနက် ၅ စီးခန့်သာ စက်စွမ်းအား ကောင်းမွန်ကြောင်း သိရသည်။
ပြိုင်ကား တချို့မှာ ယှဉ်ပြိုင်နေသော လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် စက်ရပ်တန့်သွားခြင်း၊ တစီးနှင့် တစီး အမြန်နှုန်း မတူညီခြင်း စသော လိုအပ်ချက်များကြောင့် အရည်အချင်းရှိ ပြိုင်ပွဲဝင်များ နစ်နာခဲ့ရသည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြိုင်ကားကွင်း ၂ ကွင်း တည်ထောင်ထားသူ မစ္စတာ ဂါနာကပြောသည်။
“ပြေးလမ်းပေါ်မှာ အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြိုင်ကားကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ထိန်းပြီးမောင်းနိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မောင်းနေရင်း ကားတွေက အရှိန်သေသွားတော့ တကယ်မောင်းနိုင်တဲ့ လူတွေ အပယ်ခံရတဲ့ စာရင်း ၀င်သွားကြတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းပြိုင်ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတွင် အမျိုးသား ၁၆ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၁ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်မှု ပုံမှန်ပြုလုပ်ထားသော အဆိုပါပြိုင်ပွဲဝင်များ အားလုံးနီးပါး အရည်အချင်းရှိကာ ပြိုင်ကားများကို ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်ကြောင်း ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူ တဦးကပြောသည်။
“တာစထွက်ကတည်းက အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ မောင်းနိုင်နေတာဗျာ၊ နှစ်ပတ်လောက် ပတ်မောင်းပြီးတော့ မကြာဘူး၊ ကားက ဒီအတိုင်းစက်သေပြီး ထိုးရပ်သွားတယ်။ ဒိုင်ကိုလည်း ပြောလို့မရဘဲ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်လိုက်ရတယ်” ဟု ပထမအသုတ်တွင် အပယ်ခံခဲ့ရသော ပြိုင်ပွဲဝင် အမျိုးသား တဦးကဆိုသည်။
ယခုပြိုင်ပွဲသည် ပထမအကြိမ်ဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာရှိသေးကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တတ်နိုင်သမျှ လိုအပ်ချက် နည်းစေရန် စီစဉ်ထားကြောင်း Galaxy Racing Karts Groupမှ နည်းပြ ဦးအောင်နိုင်ဦးက ပြောသည်။
တဦးတည်းသော အမျိုးသမီး ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်သူ မအိအိချောက “အရှိန်ကို မထ်ိန်းနိုင်ကြတာလည်း ပါမယ်။ မောင်းနေရင်း ကားတော်တော်များများ လည်လည်သွားတယ်။ တချို့ကားတွေဆို စက်ရပ်သွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါကားမောင်းပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် Myanmar Championship ပြိုင်ပွဲ အကြိုအဖြစ် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲများကို လာမည့် နှစ်အတွင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်၊ ဧပြီ ၁၈ရက်၊ ဇွန် ၂၀ရက်၊ သြဂုတ် ၂၂ ရက်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ရက် စုစုပေါင်း ၆ ကြိမ်ကျင်းပရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ပြိုင်ကားကွင်းပိုင်ရှင် ဦးတင်မြင့်အောင်က ပြောသည်။
ပြိုင်ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆု ကျပ် ၁၀ သိန်းကို ကိုကောင်းမြတ်မိုး၊ ဒုတိယဆု ကျပ် ၅ သိန်းကို ကိုအေးမင်းဝင်းနှင့် တတိယဆု ကျပ် ၃ သိန်းကို ကိုအောင်နိုင်ဦးက ရရှိခဲ့သည်။
ညနေပိုင်း ဆုချီးမြင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ မြေး နေရွှေသွေးအောင် (ခေါ်) ဖိုးလပြည့် တက်ရောက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
Galaxy ပြိုင်ကားမောင်းကွင်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကွင်းအရှည် မီတာ ၁၂၅၀ ကျော် ရှည်လျားကာ ဧရိယာ ၆.၅ ဧကကျယ်ဝန်းပြီး2stroke ၁၅ စီး၊4stroke ၅ စီးတို့ဖြင့် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 09:480comments
ကိုညီညီအောင်ကို ပုဒ်မ ထပ်တိုးပြန်
Tuesday, 29 December 2009 19:21 အေးလဲ့
.မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံသား ခံယူထားသူ ကိုကျော်ဇောလွင် (ခေါ်) ကိုညီညီအောင်ကို ပုဒ်မတခု ထပ်တိုး စွဲဆိုလိုက်ကြောင်း ၎င်း၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ယနေ့ပြုလုပ်သည့် ကိုညီညီအောင်အတွက် အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံး ရုံးချိန်းကို အမေရိကန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အကျိုးဆောင် ရှေ့နေ ၂ ဦး တို့ ၁၅ မိနစ်ကြာ တက်ရောက် ကြားနာခွင့် ရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နောက်တကြိမ် တရားရုံးချိန်းကို လာမည့် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်၊ သောကြာ နေ့သို့ ပြန်လည် ချိန်းဆိုလိုက်သည်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
ကိုညီညီအောင်ကို ယခု ထပ်မံစွဲဆိုသည့် အမှုသည် ရဲအရေးမပိုင်သော အမှု ဖြစ်သည့်အတွက် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် မှတ်ပုံတင်ရုံးက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ (၃) ဖြင့် တရားရုံးသို့ ဦးတိုက် လျှောက်ထားသည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းကလည်း “အရင်က စွဲဆိုထားပြီး ဖြစ်တဲ့ အမှု နှစ်မှုကို စွဲချက် တင်သင့်၊ မတင်သင့် လျှောက်လဲချက် စာနဲ့ ရေးတင်ရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကိုညီညီအောင်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းက “သူ့ကို ကြည့်ရတာ ကျန်းမာရေးက အရင်တပတ်ကထက်စာရင် အများကြီး ကောင်းပါတယ်၊ သူ့အမှုအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရက ကိုညီညီညီအောင်ကို နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် အတုပြုလုပ်သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မဖြစ်သော စာရွက်စာတမ်း လိမ်လည် အတုပြုလုပ်သည့်ပုဒ်မ (၄၂၀)၊ စာရွက်စာတမ်း အတုကို အသုံးပြုသည့် ပုဒ်မ (၄၆၈) နှင့် နိုင်ငံခြားငွေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ဖောက်ဖျက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားငွေ တရားမဝင်လက်ဝယ် ထားရှိသည့် ပုဒ်မ (၂၄/၁) တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားခဲ့သည်။
ယမန်နေ့က ရန်ကုန်အခြေစိုက် အမေရိကန်သံရုံးမှ ဒု ကောင်စစ်ဝန်အပါအဝင် တာဝန်ရှိသူတို့ ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရကြောင်း ကိုညီညီအောင်၏ အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေက ပြောသည်။
သို့သော် အမေရိကန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးကမူ ယမန်နေ့က ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာမှ ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က အမေရိကန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကိုညီညီအောင်တို့ ခေတ္တခဏတွေ့ဆုံခဲ့ရာ ၎င်း၏ အစာအငတ်ခံဆန္ဒပြမှု ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ကြာင်းကို အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကိုညီညီအောင်သည် ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်းတွင် အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းများက အကျဉ်းသားများအပေါ် ဆက်ဆံရေး မတရားမှုကို မကျေနပ်သည့်အတွက် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကဲ့သို့ ဆန္ဒပြခဲ့သောကြောင့် အာဏာပိုင်များက စစ်ခွေးတိုက် ထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ တိုက်ပိတ်လိုက်ကြောင်း ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေက ပြောသည်။ ထိုအတောအတွင်း သူ၏ ကျန်းမာရေးမကောင်းဆိုသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
အင်းစိန်ထောင် ဝန်ထမ်းတဦးက ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေအား တပတ်လျှင် တကြိမ် ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့် ပေးနေရာမှ နှစ်ပတ်လျှင် တကြိမ်သာ ပေးတွေ့တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားသည် ဟု ပြောသည်။ အလားတူ အမေရိကန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများကိုလည်း နှစ်ပတ်လျှင် တကြိမ်သာ ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်ပေးသည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဘန်ကောက်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့စဉ် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်၌ ကိုညီညီအောင်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ သူ အဖမ်းခံရပြီး ၃ ပတ်အကြာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်ချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေရာ ထိုပေါက်ကွဲမှုများအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟုလည်း အစိုးရ သတင်းစာထဲတွင် စွပ်စွဲထားသည်။
ကိုညီညီအောင်၏ မိခင်အပါအဝင် မိသားစုဝင် ၅ ဦးသည် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြင့် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၂၁၇၃ ဦးရှိကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) စာရင်းအရ သိရသည်။
Posted by justfreeman at 09:410comments
ပေါက်ပေါက်/ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉
နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်သည့် ကချင်အထူးဒေသ (၁)၊ ယခင် ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် (NDA-K) နယ်မြေအတွင်းရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းအနီးတွင် မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းကစ၍ နအဖက တပ်စခန်းအသစ်တခု ဆောက်လုပ်ကာ တပ်စွဲနေသည်။
အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (နတခ) လက်အောက်ခံ၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ အိမ်မဲမြို့ အခြေစိုက် ခလရ (၆၃) က တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကန်ပိုက်တီးကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနီး စင်ကျိုင်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အမှတ် (၁ဝဝ၃) တပ်ရင်းအနီးတွင် အဆောက်အဦ တန်းလျားအသစ်များ ဆောက်ကာ တပ်ချထားသည်ဟု ကန်ပိုက်တီးမှ ပြန်လာသူ မြစ်ကြီးနားဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဆဒုံးနဲ့ ကန်ပိုက်တီးအကြားမှာ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်လုပ်ထားတဲ့ အမှတ် (၁ဝဝ၃) နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ တပ်တည်နေတယ်။ အဆောက်အဦတွေ ဆောက်ပြီးတဲ့ဟာလည်း ပြီးနေပြီ။ အချို့လည်း ဆောက်နေတုန်းပဲ။ မိသားစုတွေတော့ ပါလာတာ မတွေ့ သေးဘူး။ ဧရာဝတီတိုင်းက တပ်ပေါ့။ မပခ တပ်ကတော့ လုပိနားမှာ ရှိတယ်။ အမှတ် (၁ဝဝ၂) ရှိတဲ့ဘက်မှာ။ အဲဒါကတော့ အရင်ကတည်းက တပ်စခန်းထိုင်နေတာ” ဟု ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေစိုက်ထားသည့် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ) လက်အောက်ခံတပ်များ၊ စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် (စကခ) နှင့် ဒေသကွပ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ် (ဒကစ) လက်အောက်ခံတပ်များကို မထားဘဲ အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံတပ်ကို လာရောက်အခြေစိုက် တပ်စွဲစေခြင်းမှာ ထူးခြားကြောင်းနှင့် အဆိုပါဒေသတွင်းမှ တပ်ပြန်ဆုတ်ရန်မရှိဘဲ တိုးပြီးချထားရန်သာ ရှိနိုင်ကြောင်း တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် စစ်ရေးအကဲခတ် ဦးအောင်ကျော်ဇောက သုံးသပ်သည်။
၎င်းက “နယ်ခြားစောင့်တပ်ဆိုတာ တချိန်ချိန်မှာ ဖျက်မှာပဲ။ ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကို သူ့တပ်ထဲကို ဆွဲသွင်းမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ယုံကြည်ရတဲ့ သူတို့တပ်ကို လာထားတာပဲ။ ကိုးကန့်ကျတော့ ဗမာတပ်ရင်း (၇ ၊ ၈) ရင်း ရှိတယ်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေနဲ့ ဒေသကို ခြေနိုင်လက်နိုင်ဖြစ်အောင် သူ့ရဲ့ အဓိကတပ်တွေကို လာပို့ထားတာပဲ။ အိမ်မဲဆိုတာ အဝေးကြီးလေ။ မပခမှာလည်း တပ်အများကြီးပဲ၊ စကခ (၃) တို့၊ စကခ (၂၁) တို့ရှိတယ်။ တနိုင်းက ဒကစ တပ်ရှိတယ်။ အဲဒီရင်းတွေက လာထားလို့ ရရက်သားနဲ့ နတခအောက်က တပ်ကို ဆွဲထုတ်လာထားတာက ရေရှည်အနေနဲ့ ဒီဒေသကို ချုပ်ကိုင်နိုင်အောင် လာထားတာပဲ။ နောက်ထပ်လည်း လာနိုင်သေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကချင်ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် (NDA-K) တပ်ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ခဲ့သည့် ဦးဆခုံတိန့်ယိန်းနှင့် ဦးလယောက်ဇယ်လွန်း တို့သည် ၁၉၇ဝ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့မှ လူအင်အား (၂ဝဝ) ခန့်ဖြင့် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) သို့ ကူးပြောင်းလာခဲ့သည်။
ဗကပ၏ (၁ဝ၁) စစ်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရာမှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗကပမှ ခွဲထွက်ကာ (NDA-K) တပ်ဖွဲ့ထူထောင်ပြီး နအဖနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးပြုလုပ်ခဲ့ကာ နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း (၃) ရင်းဖြင့် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 11:030comments
လင်းနိုင်ဦး / ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉
ကချင်အထူးဒေသ (၁) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆခုံတိန့်ယိန်း ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပါဝင်သည့် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအားလုံး နာမည်ပျက်စာရင်း အသွင်းခံရကာ လုပ်ငန်း အားလုံး ရပ်ဆိုင်းထားရကြောင်း ကုမ္ပဏီအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ဒေသပိုင် ဗန်းမော်က သစ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတခု အခွန်မသွင်းလို့ နာမည်ပျက်စာရင်းအသွင်းခံရတယ်။ အဲဒီကုမ္ပဏီမှာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက ဦးဆခုံတိန့်ယိန်း ဖြစ်တယ်။ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ခေါင်းဆောင်ပြီး ဝန်ကြီးတွေ ပါဝင်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒ ကောင်စီက ဦးဆခုံတိန့်ယိန်း နာမည်ပေါက်တဲ့ ကုမ္ပဏီအားလုံးကိုပါ နာမည်ပျက်စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်တယ်။ စုစုပေါင်း မြန်မာတပြည်လုံး ကုမ္ပဏီ (၃၆) ခုနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းတာမှာ ဦးဆခုံတိန့်ယိန်းပိုင် ကုမ္ပဏီ (၈) ခု ပါဝင်ပြီး လုပ်ငန်းတွေ အားလုံးရပ်ဆိုင်းကုန်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ (၈) ခုထဲတွင် ဗန်းမော်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီအပြင် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်း တူးဖော်ရေး၊ မိုးကုတ် ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေး၊ မြစ်ကြီးနား ရွှေတူးဖော်ရေးနှင့် အထူးဒေသ (၁) အတွင်း ကျောက်မီးသွေး တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအားလုံး ရပ်ဆိုင်းထားရသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ နေပြည်တော် အထိ သွားရောက် ဖြေရှင်းခြင်းများ လုပ်ကိုင်နေပြီး မကြာမီ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီအရာရှိက ပြောသည်။
ယခုကုမ္ပဏီများကို ပိတ်ပင်သည့်ကိစ္စမှာ နိုင်ငံရေးကိစ္စ ပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊ ယခင် အန်ဒီအေ တပ်ဖွဲ့တွင် အဆင့်မြင့်တာဝန် ယူခဲ့ဖူးပြီး ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်အကုန် အဖွဲ့အစည်းမှ ထွက်ခဲ့သူတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးနဲ့ ဝန်ကြီးတွေဟာ ဦးဆခုံတိန့်ယိန်းဆိုတာကို မသိဘဲ ကုမ္ပဏီတွေကို နာမည်ပျက် စာရင်းသွင်းပြီး ဖျက်သိမ်းခိုင်းတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လောလောဆယ် ဦးဆခုံတိန့်ယိန်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စ စစ်တပ်အလိုကျ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဖိအားပေးတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အန်ဒီအေ (ကချင်) အထူးဒေသ (၁) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆခုံတိန့်ယိန်းသည် ၁၉၈၉ ဒီဇင်ဘာ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူပြီးစဉ်မှစ၍ ဒေသတွင်း သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရက အထူးအခွင့်အရေးများ ပေးလာသည့်အတွက် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး၊ ခန္တီးကျောက်စိမ်း တူးဖော်ရေး၊ မိုးကုတ်ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေး၊ ဗန်းမော်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး၊ မြစ်ကြီးနား ရွှေတူးဖော်ရေး၊ အထူးဒေသ (၁) အတွင်း ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း စသည့်လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီအားလုံးကိုလည်း ၎င်း၏ နာမည်နှင့် ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်နေရာတို့တွင် ဇနီးနှင့် သားများ၏နာမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်အတွင်း အန်ဒီအေ (ကချင်) တပ်ဖွဲ့ကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရန် စစ်အစိုးရက ညွှန်ကြားရာတွင် ဦးဆခုံတိန့်ယိန်းအနေဖြင့် ဒေသတွင်းနှင့် မြို့ပေါ်ရှိ ၎င်းပိုင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားများ ဆုံးရှုံးမည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်ပြီး လိုက်လျောရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အန်ဒီအေ တပ်မှူး၊ တပ်သားဟောင်းများက ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည်။
Posted by justfreeman at 11:010comments
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာအပါအ၀င် တောင်းစားသူများကို အရေးယူမည်
ရဲရင့် / ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လိုက်လံတောင်းစားနေသူများနှင့် ဂိုဏ်းအဖွဲ့များကို ထိုင်းအစိုးရက ပြင်းထန်စွာ ဖမ်းဆီးအရေးယူတော့မည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း လိုက်သောကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တောင်းစားနေသည့် မြန်မာများပါ အရေးယူခံရတော့မည်ဖြစ်သည်။
ယခုလ (၂၃) ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ထိုင်းအစိုးရ ၀န်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးရှိ တောင်းစားသူများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးကာ ရိုးရိုးသားသား တောင်းစားသူများကို ပြန်လည်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဌာနများသို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး တောင်းစားရန် စေခိုင်းသည့် ဂိုဏ်းအဖွဲ့များကို ထောင်ဒဏ် (၇) နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ ဘတ် (၆) သောင်း ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။
ဘန်ကောက်အပါအ၀င် မဲဆောက်၊ ရနောင်း၊ မယ်ဆိုင် စသည့်ဒေသများတွင် လိုက်လံတောင်းစားသူ မြန်မာကလေးငယ် (၄,၀၀၀) ခန့်ရှိသည်ဟု မြန်မာကလေးငယ်များကို သုတေသနပြုနေသည့် အဖွဲ့တဖွဲ့၏စစ်တမ်းကို ကိုးကားပြီး ဝေါဗွီရှင်း အဖွဲ့ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
မဲဆောက်မြို့တွင် တောင်းစားသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကလေးလူကြီး (၁၀၀) ခန့်ရှိပြီး ထက်ဝက်ခန့်မှာ မြ၀တီမှတဆင့် ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် လာရောက်သူများဖြစ်ပြီး ကျန်တ၀က်ခန့်မှာ ဂိုဏ်းများ၏ စေခိုင်းခြင်းခံရသူများ ဖြစ်သည်။
အသက် (၇၅) နှစ်ခန့်ရှိ မျက်မမြင်ဖခင်ဖြစ်သူအား မဲဆောက်ဈေးတွင် တောင်းရမ်းရန် လာပို့သည့်သမီးဖြစ်သူက “ကျမတို့က တကယ်ဒုက္ခရောက်လို့ပါ။ ရတာတွေကို အဖေ့အတွက်ပဲ သုံးတာပါ။ ရန်ကုန်အထိ ခေါ်ပြီးပါပြီ။ ဘိုးဘွားရိပ်သာဆိုတာက သူ့အဆက်နဲ့သူခေါ်တာပါ။ တကယ်ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့လူဆိုရင် လက်မခံပါဘူး၊ ကျမ ကိုယ်တွေ့ပါ” ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တောင်းစားသူ ကလေးငယ်တဦးက “ကျနော့်အမေက သထုံကနေ အလုပ်လုပ်ဖို့ မဲဆောက်ကို ပို့လိုက်တာပါ။ အမေက အလုပ်ရှင်ဆီက ဘတ်ငွေ (၈) ထောင် ယူထားတယ်။ အလုပ် (၆) လ လုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီး ဈေးထဲမှာ တနေ့ ဘတ် (၁၀၀) ရအောင် လိုက်တောင်းရတယ်၊ မရရင်အိမ်မပြန်ရဘူး၊ ထမင်းလည်းမကျွေးဘူး၊ အရိုက်ခံရတာလည်းရှိတယ်၊ အကြွေးကျေရင် ကျနော့်ကို ဘန်ကောက်ပို့မယ်လို့ပြောတယ်။ အခု (၆) လပြည့်တော့မယ်” ဟု ပြောသည်။
မဲဆောက်မြို့တွင် တာဝန်ကျသည့် မြူနီစပါယ် ရဲဝန်ထမ်းတဦက “သူတောင်းစား (ခေါထံ) တွေကို အရင်က စီမံချက်နဲ့ဖမ်းပြီး ပြန်ပို့တာတွေရှိတယ်၊ အလုပ်မဖြစ်ဘူး ပြန်လာကြတာပဲ။ အရေပြားရောဂါသည်တွေ ပါတော့ ရပ်ကွက်က ရုံးကိုတိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ အခုအစိုးရက တရားဝင်ဥပဒေထုတ်ပြီး ဖမ်းဖို့ရှိတော့ ဒီနေ့ဆို ဈေးထဲမှာ အတော်နည်းသွားပြီး သူတောင်းစားတွေက သတင်းကို ကိုယ့်ထက်တောင် အရင်သိတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခင်ကကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးရမိသည့် သူတောင်းစား ကလေးငယ်များကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ပြန်ပို့တော့မည်မဟုတ်ဘဲ ကလေးသူငယ် များဆိုင်ရာ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဌာနများသို့ ပို့ဆောင်သွားမည့် အစီအစဉ်များလည်း ချမှတ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
Posted by justfreeman at 10:560comments
စစ်အစိုးရက (၂) နှစ်သက်တမ်း ငွေတိုက်စာချုပ်များ ထပ်တိုးရောင်းချမည်
စိုးမိုး/ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉
စစ်အစိုးရက ငွေစက္ကူသစ် (၅) ထောင်တန်များ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ငွေတိုက်စာချုပ်များ တိုးမြှင့်ရောင်းချရန် ယနေ့ ကြေညာလိုက်သည်။
လာမည့်နှစ်သစ် ၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်နေ့မှစပြီး ငွေကျပ် (၁) သောင်းမှ (၁၀) သန်းအထိ (၂) နှစ်သက်တမ်း ငွေချေးစာချုပ် များကို စစ်အစိုးရက ထပ်တိုးရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ယခု (၅) ထောင်တန် ငွေစက္ကူသစ်များ ထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်သူထံမှ ငွေချေးသည့်သဘောဖြင့် ငွေတိုက်စာချုပ်များ ရောင်းချရန် ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“အမှန်ကတော့ သူက ပြည်သူလူထုဆီက ငွေချေးတဲ့သဘော။ ဒီတော့ ထပ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ ပြည်သူလူထုဆီက ငွေထပ်ချေးတဲ့ သဘောပေါ့” ဟု စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးခင်မောင်ညိုက ပြောသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အစိုးရတရပ်အနေဖြင့် ငွေလိုအပ်ချိန်၊ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မလုပ်ကိုင်လိုသောအချိန်၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ထိန်းချုပ်လိုချိန်တို့တွင် ပြည်သူသို့ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ချေးငွေလက်မှတ်ရောင်းချမှုများ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိရာ ဆယ်စုနှစ် တခုအတွင်း စစ်အစိုးရက ငွေတိုက်စာချုပ် အသစ်တမျိုး ထုတ်ပြီးရောင်းချရန် ယနေ့ ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ငွေဈေးကွက်အတွင်း အပြောင်းအလဲ သိပ်မရှိဘူးလို့တော့ ယူဆတယ်။ နောက်တခုက လူတွေလက်ထဲကငွေကို အစိုးရလက်ထဲ ပြန်ရောက်အောင် လုပ်တယ်ဆိုတာ ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်း လျော့အောင် လုပ်တာလည်း ဖြစ်တယ်” ဟု ဦးခင်မောင်ညိုက သုံးသပ်သည်။
ငွေတိုက်စာချုပ်ကြောင့် မြန်မာ့ငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်း ထူးခြားသည့် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ကြောင်း မြန်မာ့ စီးပွားရေးပညာရှင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက သုံးသပ်သည်။
“ငွေချေးစာချုပ်ကတော့ ဘဏ်တွေက Risk (စွန့်စားရ) နည်းတော့ သီးသန့်ငွေကြေးဆိုပြီး ၀ယ်ထားတာမျိုးရှိတယ်။ ပြည်သူ လူထုအတွင်းမှာတော့ သိပ်ပြောသံ ဆိုသံ မကြားရပါဘူး။ ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းအလဲ မရှိနိုင်ဘူးလို့တော့ သုံးသပ်ပါတယ်” ဟု ဦးခင်မောင်ညိုက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက ယခင် (၃) နှစ်နှင့် (၅) နှစ် သက်တမ်းရှိ ငွေတိုက်စာချုပ်များအပြင် လာမည့်နှစ်သစ် ၂၀၁၀ တွင် (၂) နှစ် သက်တမ်းရှိ ငွေတိုက်စာချုပ်များ ထပ်တိုးရောင်းချမည်ဆိုသော်လည်း အတိုးနှုန်း နည်းပါးသည့်အတွက် ပြည်သူလူထုက စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြကြောင်း သိရသည်။
Posted by justfreeman at 10:510comments
မျိုးချစ်သူ/ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉
Posted by justfreeman at 10:490comments
Posted by justfreeman at 10:400comments
အမေရိကန် သံရုံးက ကိုညီညီအောင်ကို ထောင်ဝင်စာတွေ့
တနင်္လာနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၁ မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။ ထောင်တွင်းမှ တရားဆိုင်နေရသူ အမေရိကန် နိုင်ငံသားဖြစ်သူ ကိုညီညီအောင်ကို ယနေ့တွင် အမေရိကန် သံရုံးမှ အရာရှိများက သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အင်းစိန်ထောင်တွင်း အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြမှုအပြီး ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်ရှိ သံရုံးမှ ဒုတိယ ကောင်စစ်ဝန်က တွေ့ဆုံပြီး အစားအသောက်များ ပေးပို့ခဲ့သည်။
“ နေ့လည် ၁နာရီ ခွဲမှာ သံရုံးက ဆက်သွယ်လာတယ်။ ဒု ကောင်စစ်ဝင်နဲ့ တွေ့ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ သံရုံးက နေကောင်းတယ်လို့ ပြောတယ်။ ”ဟု ကိုညီညီအောင်၏ အဒေါ် ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေက ပြောသည်။
“သူအနေ့နဲ့ ရှေ့နေတွေနဲ့ အရမ်းတွေ့ ချင်တယ်လို့ သံရုံးကတဆင့် ပြောခိုင်းတယ်လို့ သံရုံးက ပြန်ပြောတယ်။ သံရုံးက စားစရာ သောက်စရာတွေ သွားပေးတယ်။အဓိက သူနေကောင်းတယ်။ သူ့ရှေ့နေတွေနဲ့ တွေ့ချင်တယ် လိုပြောတယ်။ ရုံးချိန် မတိုင်မှီ တွေ့ချင်တယ်လို့ ပြောတယ်”ဟု သူမက ထပ်ပြောသည်။
ကိုညီညီအောင်ကို တွေ့ခွင့်ပြုရန်အတွက် အင်းစိန်ထောင်တွင် သူ၏ ရှေ့နေများက လွန်ခဲ့သည် ၂၅ ရက်နေ့က စာတင် လျှောက်ထားခဲ့သည်။
မနက်ဖြန်တွင် ကိုညီညီအောင် အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှုတင်သင့်၊ မတင်သင့်ကို လျှောက်လဲချက် ပေးရန်အတွက် သွားရောက် တွေ့ဆုံမည်ဟု ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသည်။
စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က တောခိုကျောင်းသား ကိုညီညီအောင်သည် ဘန်ကောက်မြို့မှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်သို့ ဝင်ရောက်လာစဉ် ထောက်လှမ်းရေးများက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ထိုင်းနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေး ခိုလှုံခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချခဲ့သော သူသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၈ ကြိမ် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
သူ့ကို လိမ်လည်မှု - ပုဒ်မ ၄၂၀၊ မှတ်ပုံတင်အတု ကိုင်ဆောင်မှု - ပုဒ်မ ၄၆၈၊ နိုင်ငံခြား ငွေလဲလည်မှု - ပုဒ်မ ၂၄ တို့ဖြင့် စွဲဆိုထားသည်။
Posted by justfreeman at 10:380comments
ဦးဥတ္တမ နှစ် ၁၃၀ ပြည့်နေ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင် ကျင်းပ
ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာပြည်သူများကို နိုင်ငံရေး မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သူ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ
Monday, 28 December 2009 18:16 ဘစောတင်
.မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ နှစ် ၁၃၀ ပြည့် မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနားကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဇ်ဘဇားမြို့ရှိ တောကျောင်းတိုက်တွင် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပ ခဲ့သည်။
နောင်လာနောက်သား မျိုးဆက်သစ်များ သိရှိစေရန် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ မွေးနေ့ကို စီစဉ်ကျင်းပ ပေးရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သာသာနာ့ဥသျှောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ ရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ် (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) ဌာနခွဲ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် အမှတ် ၂ ဆရာတော် အရှင် စန္ဒာဝရက ဧရာဝတီသို့ မိန့်ကြားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို စစ်အစိုးရက တတ်နိုင်သမျှ မှေးမှိန်အောင် လုပ်နေတယ်။ အခုခေတ် လူငယ်တွေက ဆရာတော်ဟာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဆိုတာကို မသိကြ တော့ဘူး၊ သိခွင့်လည်း မရှိကြတော့ဘူး” ဟု ဆရာတော်က ဆိုသည်။
အခမ်းအနားသို့ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) ၏ အတွင်းရေးမှူး ကိုကံမြင့်၊ တသီးပုဂ္ဂလ ဦးဖိုးလှ၊ ရခိုင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး ဖလောင်းချိတ်မှ ဒေါ်မစိန်ပုတို့ တက်ရောက်ကာ အသီးသီးအမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြပြီး ဦးစောရာဇာက ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသီချင်းကို ဂုဏ်ပြုသီဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနား ကျင်းပရာတွင် ပါဝင်သူ တဦးဖြစ်သော အမျိုးသားရေး နိုင်နိုင်က “ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ မွေးနေ့ကို မျိုးဆက်သစ်တွေ သိရှိဖို့ရယ်၊ ပြီးတော့ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ မျိုးဆက်သွေးတွေဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးတုန်းက သာသနာ့ အာဇာနည်တွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရယ် ရည်ရွယ် ကျင်းပတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနားတွင် သာသနာ့ဥသျှောင် (ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) ၏ အတွင်းရေးမှူး ဆရာတော် ဦးရက္ခ၀ံသက နအဖအစိုးရ ကျင်းပရန် စီစဉ်နေသော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
“၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်ပါတယ်၊ အခုလို တဇွတ်ထိုး တဘက်သတ် သူတို့ဘာသာ လုပ်ဖို့ စီစဉ်တာဟာ ဦးပဉ္ဇင်းတို့ ပြည်သူတွေကို ထာဝရ ကျွန်ဇာတ်သွင်းဖို့ လုပ်တာမို့လို့ တိုင်းသူ ပြည်သားတရပ်လုံးအနေနဲ့လည်း ဆန့်ကျင်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်၊ ပြည်သူ့ ဆန္ဒမပါဘဲ အတင်း အဓမ္မ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့် နအဖ ကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချပါတယ်” ဟု ဆရာတော် ဦးရက္ခ၀ံသက ဆိုသည်။
အလားတူ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း တကျောင်းတွင်လည်း ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ နှစ် (၁၃၀)မြောက်မွေးနေ့ပွဲကို လျှို့ဝှက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စာရွက်စာတမ်းများ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမကို ၁၈၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့၌ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ရူပရပ်တွင် ဖခင် ဦးမြ နှင့် မိခင် ဒေါ်အောင်ကျော်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်နာမည် မောင်ပေါ်ထွန်းအောင် ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ငယ်ရွယ်ချိန်အခါကတည်းက ပညာရေးထူးချွန်ခဲ့ရာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ယူခွင့် ရခဲ့သော်လည်း မိခင်ကခွင့်မပြုသဖြင့် မသွားရောက်ခဲ့ရပေ။
ဆရာတော် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် မိဘများ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ရှင်သာမဏေ ပြုပေးခဲ့သည်။ အသက် ၁၉နှစ်တွင် ရဟန်းပြုပြီး နောက်ပိုင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့သို့ ရဟန်းဝတ် နှင့်ပင် သွားရောက်ခဲ့စဉ် နိုင်ငံရေး၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များ နိုးကြားခဲ့သည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ဘာသာစကားပေါင်းများစွာကို တတ်မြောက်ပြီး အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ကိုးရီးယား၊ အီဂျစ်၊ ပြင်သစ် စသည့် နိုင်ငံအများအပြားကို ခရီးလှည့်လည်ခဲ့သည်။
၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆရာတော်သည် မြန်မာတပြည်လုံးသို့ လှည့်လည်ကာ နယ်ချဲ့ဆန်ကျင်ရေး တရားများကို ဟောပြောခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဟောပြောမှုဖြင့် ၁၉၂၀ မတ်လ တွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ချမှတ် ခံရသည်။
ဆရာတော်သည် ၁၉၂၄ ခုနှစ် တွင်လည်း “အစိုးရမကောင်းလျှင်မကောင်းဟု ဝေဖန်ခွင့်ဟာ လူ့အခွင့် အရေးပဲ၊ ဒီအခွင့်အရေးဟာ ငါတို့မှာ ရှိတယ်၊ ငုံ့မခံကြနဲ့” ဟု ပြည်သူများကို လှုံ့ဆော် ဟောပြောခဲ့သည့် အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ထောင် ၃ နှစ် ကျခဲ့ပြီး ၁၉၂၈ တွင် တတိယအကြိမ် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ထိုအချိန်က ဗြိတိသျှအစိုးရ ဘုရင်ခံချုပ်ကိုလည်း “ဆာ ရယ်ဂျီနယ် ကရက်ဒေါက် မင်းဗမာပြည်မှ ထွက်သွားပါ” ဟူသည့် စာကို ရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ဟောကြားခဲ့သော ရဲရဲတောက် တရားများကြောင့် ဆရာတော်သည် ကိုလိုနီခေတ်တွင် နိုင်ငံရေးအရ ပထမဦးဆုံး ထောင်ချခံခဲ့ရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ကိုယ်တိုင်လှည့်လည်ကာ နိုင်ငံရေးတရားဟောသကဲ့သို့ သူရိယသတင်းစာတွင်လည်း နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများ ရေးသားကာ ပြည်သူလူထုကို နိုင်ငံရေးအသိ နိုးကြားလာစေရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
ဆရာတော်သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းသူ မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဖြစ်ကြသော တရုတ်ပြည်မှ ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်၊ အိန္ဒိယမှ မဟတ္တမ ဂန္ဒီ၊ ၀န်ကြီးချုပ် နေရူးတို့နှင့်ပါ ရင်းနှီးသူ ဖြစ်သည်။
ဆရာတော်သည် ၁၉၃၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပြီး ပျံလွန်တော်မူချိန်တွင် သက်တော် ၆၀ နှစ်၊ ဝါတော် ၄၁ ၀ါရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ပျံလွန်ချိန်အထိ နယ်ချဲ့ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ ပျံလွန်တော်မူသည့်နေ့ကို အင်္ဂလိပ်ခေတ် မြန်မာ လွှတ်တော်က ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အာဏာပိုင်တို့သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အနီးရှိ ဦးဥတ္တမပန်းခြံကို ကန်တော်မင် ပန်းခြံ အဖြစ်ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုစေခြင်း၊ စစ်တွေမြို့ ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံရှိ ဦးဥတ္တမရုပ်တုကို မွမ်းမံမှု မရှိခြင်း၊ ဆရာတော် ရုပ်တုကို အရိုအသေပေးမှုများအား တားမြစ် အရေးယူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေး စိတ်ဓာတ်အား အတုယူလာမည်ကို စစ်အာဏာပိုင် များက စိုးရိမ်သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အများက ယူဆကြသည်။
Posted by justfreeman at 10:190comments
မြစ်ဆုံရေလှောင်တမံ စီမံကိန်းအတွက် ဒေသခံများကို နေရာရွှေ့ပြီ
Monday, 28 December 2009 17:58 ရှောင်ဆန့်
.ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံ ရေလှောင်တမံ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအတွက် ဒေသတွင်း နေထိုင်သူများကို အာဏာပိုင်များက စတင် ဖယ်ရှားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရေလှောင်တမံ ဆောက်လုပ်ပါက ရေလွှမ်းမိုးမှု ခံရနိုင်သည့် ရွာပေါင်း ၆၀ ကျော်တွင် နေထိုင်သူပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်ခန့် ရှိရာ ထိုအထဲမှ ဖြစ်ကြီးနားမြို့ တန်ဖဲရွာကို နေရာသစ်သို့ ပထမဆုံး စတင်ပြောင်းရွှေ့ ခိုင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တန်ဖဲရွာတွင် လူဦးရေ ၁၀၀ ခန့် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
“လောလော ဆယ်တော့ ကျမတို့ တန်ဖဲကို အရင်ဆုံး ရွှေ့ခိုင်းနေတယ်။ ကျမတို့ အရမ်း အားငယ်တယ်။ ရွာလူကြီး တွေကတော့ အားမငယ်ဖို့၊ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်လာလာ ရွာကနေ လုံးဝမရွှေ့ပေးဖို့ အားပေးရင်း နည်းလမ်းတွေ ရှာနေတယ်” ဟု ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
ပြောင်းရွှေ့ရမည့် ရွာသားများကို နေရာချထားပေးရန် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ရွာတရွာ ဖြစ်သည့် ကျိန်ခရမ် ရွာဘေးတွင် ရေလှောင်တမံ တည်ဆောက်မည့် Asia World ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူ၍ တဲပေါင်း ၅၀၀ ကျော် ဆောက်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က ရေလှောင်တမံ စတင် ဆောက်တော့မည်ဟု တရားဝင် ကြေညာစဉ် ပြောင်းရွှေ့ခံရမည့် ရွာသားများကို တအိမ်ထောင်လျှင် ဆန် ၁ တင်းနှင့် စားဆီ ၁ ပိဿာစီ ထုတ်ပေးခြင်းမှအပ အိမ်တန်ဖိုး တစုံတရာ ထောက်ပံ့ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဒေသခံ ရွာသားများက ပြောင်းရွှေ့မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
“ကျိန်ခရမ်ရွာဘေးမှာ တဲလေးပဲ ထိုးပေးတယ်။ ဘာမှပေးဖို့မရှိဘူး။ အိမ်ခြံမြေ အားလုံး စွန့်လွှတ်လိုက်ရမှာ။ အခုလို တဲပဲ ပေးတာဆိုတော့ ကျမတို့ ဘယ်လို အသက်ရှင်ရမလဲ။ ကျမတို့ရဲ့ အိမ်နဲ့ ခြံမြေတွေကို တိုင်းပြီး လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့တာက ကျမတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်မြေဖြစ်ကြောင်း တင်ပြတာပါ။ ကျမတို့ သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ထိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံးဝ မရွှေ့နိုင်ဘူး” ဟု တန်ဖဲရွာမှ ဒေသခံ အိမ်ရှင်မ တဦးက ဆိုသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်ရှိ အဆိုပါ ရေလှောင်တမံ စီမံကိန်းအတွက် ပြောင်းရွှေ့ပေးရမည့် ရွာများကို လျော်ကြေးပေးမည်ဆိုကာ အာဏာပိုင်များက နေအိမ်အတိုင်းအတာများ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို စာရင်းယူခဲ့ကြောင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရွက်စာတမ်းများ မပြနိုင်ပါက နေအိမ်တန်ဖိုးသာ ပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယခု အချိန်ထိ မည်သည့် ငွေကြေးတစုံတရာ မရရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
“ရေလှောင်တမံ ဆောက်လုပ်ဖို့ အလုပ်သမားပေါင်း ၄၀၀၀၀ ကျော်လောက်နဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စစ်သား ထောင်ဂဏန်း သုံးလိမ့်မယ်” ဟု ထိုဒေသအကြောင်း အထူးလေ့လာနေသော ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကချင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက် (KDNG) မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဆိုသည်။
ဤကဲ့သို့ အလုပ်သမားများ၊ စစ်သားများ လာရောက်မည် ဖြစ်သောကြောင့် လူမှုရေးပြဿနာများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု များသည် ကချင်ပြည်သူများအပေါ် ကျရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေလှောင်တမံ ဆောက်လုပ်ပါက ကချင်တိုင်းရင်းသား များ၏ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ပျောက်ကွယ်ကာ ဒေသခံများ၏ ဘိုးဘွားပိုင် မြေယာနှင့် သီးနှံပင်များ ဆုံးရှုံးရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးခြင်းနှင့် ဇီဝ မျိုးသုဉ်းမှုများသည် ရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
ဤမြစ်ဆုံရေလှောင်တမံ စီမံကိန်းကို တရုတ် စွမ်းအင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ (CPI) အဖွဲ့ နှင့် Asia World ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း ပြီးစီးပါက ထွက်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ် ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၁၃၃၆၀ ကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် တပတ်အတွင်း တရုတ် ဒုတိယသမ္မတ ရှီကျင်းဖျင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် ၃ ချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
Monday, 28 December 2009 19:41 ၀ါးရှီးဖော
.ရန်ကုန်မြို့တွင် အမှိုက် စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်မှုများကို တားဆီးလျက် ရှိရာ ၄ လအတွင်း အပြစ်ပေး အရေးယူ ခံရသူပေါင်း တထောင်ကျော် ရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
Posted by justfreeman at 10:100comments
မြို့မငြိမ်း ရာပြည့် ဂုဏ်ပြုပွဲ ကျင်းပမည်
Saturday, 26 December 2009 16:18 အေးလဲ့
.အလင်္ကာကျော်စွာ ဆရာမြို့မငြိမ်း အသက် ၁၀၀ ပြည့်မွေးနေ့ ဂုဏ်ပြုပွဲကို မန္တလေးမြို့မ တူရိယာ အသင်းတိုက်၌ လာမည့် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ သူ၏ တိမ်မြုပ်နေသည့် တေးသီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ဂုဏ်ပြုပွဲကို မန္တလေး စာပေနှင့် အနုပညာရှင်များ အသိုင်းအ၀ိုင်းကကျင်းပ ကြမည်ဖြစ်သည်။
မြို့မငြိမ်း ရာပြည့်တွင် စန္ဒရား ဦးသိန်းမောင်၊ အဆိုတော် ရာဇာဝင်းတင့်၊ သန်းသန်းစိုးနှင့် ရီရီသန့် စသော ရန်ကုန်၊ မန္တလေး အနုပညာရှင်များနှင့် မန္တလေး မြို့မ တူရိယာ သံစုံတီးဝိုင်းတို့က ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံ စာနယ်ဇင်းသမား တဦး ကပြောသည်။
မြို့မ တူရိယာဝိုင်း၏ အကြီးအမှူး ဖြစ်သူ ဆရာမြို့မငြိမ်း၏သား ဦးရွှန်းမြိုင်က“ကျနော်တို့က အဖေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ခေတ်မီ တီးဝိုင်းဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ခေတ်မီတီးဝိုင်းဖြစ်ဖို့က အချိန်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုတယ်။ ပါဝင်လုပ်ဆောင်သူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်က အရေးအကြီးဆုံးပါ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဆရာမြို့မငြိမ်းသည် ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် သူနှင့် ဂီတဝါသနာတူ အပေါင်းအသင်းများဖြင့် မြို့မ တူရိယာအသင်းကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် ၎င်းအသင်းကြီး၏ ဂီတအခြေပြု ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သော မြန်မာသီချင်းကြီးများ ဆည်းပူးပြန့်ပွားရေး၊ ကမ္ဘာ့ခေတ်မီ တူရိယာဝိုင်းကြီး ဖြစ်မြောက်ရေး အစရှိသည့် အချက်များဖြင့် တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
ဆရာမြို့မငြိမ်းအကြောင်း အထူးလေ့လာခဲ့သူ မန္တလေးအခြေစိုက် စာရေးဆရာ ဆူးငှက်က“သူ့ဂီတ ရည်မှန်းချက်က ကြီးတယ်၊ သူက မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အနောက်တိုင်း တူရိယာတွေနဲ့ မြန်မာသီချင်းကြီးတွေကို ဆင်ဖိုနီ ပုံစံ တီးနိုင်ရမယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီး ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ သူတယောက်တည်း မဟုတ်ဘဲ ဓားတန်း ဦးသန့်နဲ့ပေါ့နော်၊ အဲဒီကာလမှာ ကတည်းက သူတို့တွေ အမြင်ကျယ် တယ်၊ စာဖတ်နိုင်တယ်၊ အနောက်တိုင်း စာပေ၊ ဂီတကို လက်လှမ်းမီတယ်”ဟုပြောသည်။
ဆရာ ဆူးငှက်သည် မြန်မာ့ရိုးရာဂီတနှင့် အနောက်တိုင်းဂီတ ရောစပ်ဖန်တီးမှု အခြေခံသည့် “တိမ်ယံ အိပ်မက် မိုးထက်နရီ” ၀တ္ထုဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် အမျိုးသား စာပေ ၀တ္ထုရှည် ဆုရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ယင်း ဝတ္ထုတွင် မန္တလေးမြို့၌ ရတနာပုံ ခေတ်က ထွန်းကားခဲ့သည့် ရိုးရာ ဂီတနှင့် ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်ကြီးအပြီး နိုင်ငံခြားက ၀င်ရောက်လာသည့် အနောက်တိုင်း ဂီတ၊ တူရိယာတွေများ မည်သို့ပေါင်းစပ်ကြသည်၊ ဆရာ မြို့မငြိမ်း၊ ဓားတန်း ဦးသန့် ကဲ့သို့သော ခေတ်ပညာတတ် လူငယ်များက အနောက်တိုင်း တူရိယာ ပစ္စည်းများနှင့် မြန်မာ့ဂီတကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပြကာ တလျှောက်လုံး မြန်မာ့ မဟာဂီတကို အရိုးစွဲလာသူများကြား ရောက်ရှိစေရန် မည်သို့ ကြိုးပမ်းသည် ဆိုသည်ကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဆက်လက်ပြီး စာရေးဆရာ ဆူးငှက်က “သူက အနောက်တိုင်းတူရိယာ ပစ္စည်းတွေကို ခေတ်လူငယ် ပီပီ အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ စမ်းသပ်ချင်တယ်၊ သူတို့ တီးခတ်တာကလည်း သာမန်တီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဂီတ သင်္ကေတတွေနဲ့ တီးကြ၊ မှုတ်ကြ တာမျိုးတွေကို သဘောကျတယ်၊ ဆရာကြီး ဦးဘသက် ဦးဆောင်ပြီး ဂီတသင်္ကေတ နည်းပညာတွေကို သင်ကြတယ်၊ သူတို့က ပထမဆုံး ဗမာ ဆင်ဖိုနီ သမားတွေပေါ့” ဟု ဆရာဆူးငှက်က ပြောသည်။
ဆရာ မြို့မငြိမ်း ရေးသားခဲ့သော သီချင်း ၂၀၀ ခန့် ရှိသည်ဟု မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတွင် ပါရှိသည်။ သူ၏ သီချင်းများအနက် ပထမဆုံး ကျော်ကြားခဲ့သော သီချင်းမှာ “ချစ်တာပဓာန” သီချင်း ဖြစ်သည်။ သီချင်းရေး သက်တမ်း၂၄ နှစ်အတွင်း ကျော်ကြားခဲ့သော သီချင်း များမှာ ခင့်အိပ်မက်၊ တစ်ချစ်ထဲ ချစ်၊ မြင်းခင်းတော်၊ နတ်သျှင်နောင်၊ မေ့ပါနိုင်၊ ပျို့မှာတမ်း၊ သက်ဝေ၊ ပါရမီတော်၊ ချစ်ရဲဘော်၊ မင်္ဂလာမောင်မယ်၊ ငွေဇင်ယော်၊ ပြုံးတဲ့မေ၊ လေချိုသွေး စသော သီချင်းများဖြစ်ကြောင်းလည်း စွယ်စုံကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ၏ ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ စာအုပ်တွင်လည်း“ဆရာငြိမ်း၏ သက်ဝေ၊ တချစ်ထဲချစ်၊ သခွပ်ပန်း၊ ဒေါင်းစက်ယဉ် တို့သည် မြင်းခင်းတော်၊ နန်းမြို့တော်၊ နတ်ရှင်နောင်၊ လက်ဝဲသုန္ဒရ စသည့် သီချင်းများနှင့်အတူ ကြာရှည်တည်မည့် ခေတ်သီချင်း (Modern classics) များ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်” ဟု မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ဆရာမြို့မငြိမ်း၏ “လူချွန်လူကောင်း” သီချင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဗိုလ်ကလေးတင့်အောင် မကွယ်လွန်ခင်က ချီးကျူး ပြောဆို ခဲ့ဖူးကြောင်း စာရေးဆရာ ချစ်ဦးညိုကလည်း ပထမအကြိမ် စင်ကာပူ စာပေဟောပြောပွဲတွင် ထည့်သွင်းပြောသွားခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုလက်ထက်က ၎င်း၏ ပြည်တော်သာစီမံကိန်းအကြောင်း သီချင်းစပ် ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ဆရာ ဗိုလ်ကလေး တင့်အောင်က ပထမရခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသီချင်းကို မြန်မာ့အသံက လွှင့်သော်လည်း နားထောင်သူပရိသတ်သာမက ဆရာ ဗိုလ်ကလေးတင့်အောင် ကိုယ်တိုင် မမှတ်မိတော့ကြောင်း၊ ဆုရရန် မရိုးသားသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးစပ်သည့် သီချင်း ဖြစ်သောကြောင့် လူအများ၏ စိတ်ထဲတွင် သတိမရတော့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဆရာ ဗိုလ်ကလေးတင့်အောင်ကပင် ထိုသို့ ပြည်တော်သာစီမံကိန်းသီချင်း စပ်နေချိန်၌ မြို့မငြိမ်းက “လူချွန်လူကောင်း” သီချင်းကို လာရောက်ပြသခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသီချင်းကို ကောင်းသည်ဟု မထင်ခဲ့သော်လည်း ထိုသီချင်းမှာ ယခုအချိန်အထိ လူအများ၏ ပါးစပ် ဖျား၌ စွဲမြဲနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
ဆရာမြို့မငြိမ်း သီချင်း စတင်ရေးသားသော အချိန်၌ အနောက်တိုင်း တေးသွားများကို ပုံတူကူး၍ မြန်မာ စကားလုံးသွင်းကာ စပ်ဆိုသော အလေ့အကျင့် ခေတ်စားနေချိန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူကမူ အနောက်တိုင်း ဂီတမှ သီချင်းစပ်နည်းကို မှီငြမ်း သော် လည်း တေးသွားကို ခိုးယူခြင်းမပြုဘဲ သူ၏ ပင်ကိုဂီတဉာဏ်ဖြင့်သာ ကိုယ်ပိုင် တေးသွားများ ရေးစပ်ခဲ့သူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆရာဆူးငှက်က“အဓိက မြန်မာဂီတက လုံးကောက်တွေပေါ့ဗျာ၊ လုံးကောက်တွေဆိုတာ စာသားနဲ့ပဲ အဓိပွာယ်ဖွဲ့တာကိုး၊ အနောက်တိုင်း ဂီတမှာက စာသားမပါဘဲ ဂီတအသံနဲ့ဖွဲ့တာ တွေ့တဲ့ အခါမှာ သူတို့က ပိုကျယ်ပြန့်တယ်၊ လူမျိုးတိုင်းအတွက် ဂီတ ဖြစ်တယ်၊ ဒီတော့ ငါတို့ ဗမာ သီချင်းကြီးတွေကိုလည်း စာသားကို အဓိက မထားဘဲနဲ့ အသံနဲ့ ဒီလိုဖွဲ့နိုင်ရမယ် ဆိုပြီး ဆရာကြီးက တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားတာ”ဟု ဆိုသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ဆရာမြို့မငြိမ်းသည် သူ၏ရည်မှန်းချက် မပြည့်ဝမှုကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းလာခဲ့သည်။
“သူစိတ်ဓာတ်ကျပြီး ဂီတကို တလုံးမှ နားမလည်တဲ့ ဘတ်စ်ကား စပယ်ယာ၊ ဒရိုင်ဘာ တွေနဲ့ ဂီတကို လုပ်ပြမယ် ဆိုတာမျိုးပြောပြီး တောင်မြို့(အမရပူရ)အမှတ်(၈) လိုင်းကားက ဒရိုင်ဘာတွ စပယ်ယာတွေနဲ့ လုံးကောက်တွေမှတ်၊ ဝါးပုလွေ တွေနဲ့ လုပ်လာတယ်၊ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွတဲ့ အခါမှာ တက်ကြွ၊ စိတ်ဓာတ်အတက် အကျတွေ မြန်လာပြီး နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် အဆုံးစီရင်တဲ့ အထိ ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ”ဟု ဆရာဆူးငှက်ကပြောပြသည်။
မြို့မငြိမ်းကို ၁၉၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၅ ရက် (၁၂၇၀ ခု တပို့တွဲလဆန်း ၅ ရက် ၊ တနင်္လာနေ့) မွေးဖွားသည်ဟု ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ စာအုပ်တွင် ပါရှိသည်။
ဆရာ မြို့မငြိမ်းကို မန္တလေးမြို့၌ ဦးညီနှင့် ဒေါ်ချစ်ဦးတို့က မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း ၂ ဦးအနက် အကြီးဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းဖြစ်သည်။ ဂီတကို ဝါသနာပါသည့်အပြင် ပန်းချီပန်းပု ပညာရပ်များကိုလည်း တတ်မြောက်ခဲ့သည်။
သူ အသက် ၂၂ အရွယ်တွင် မသန်းသန်းနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီး သားသမီး ၁၃ ဦးထွန်းကားခဲ့သည့်အနက် သူ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ၈ ဦးကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဆရာ မြို့မငြိမ်းသည် ၁၉၅၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့၌ ကားမတော်တဆမှုဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဟု စွယ်စုံကျမ်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
မြန်မာ့ဂီတကို ကမ္ဘာ့ဂီတအဆင့်သို့ မြှင့်တင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းသွားသူ မြို့မငြိမ်းသည်သူ၏ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သော ဆင်ဖိုနီ (Symphony) (ခေါ်) မြန်မာသံစုံ တီးဝိုင်းဖြစ်မြောက်ရေးကို အသက်ရှင်စဉ် တလျှောက်လုံး ကြိုးပမ်းခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် မြို့မ တူရိယာအသင်း ဆက်လက် ရှင်သန်နေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း ဆရာမြို့မငြိမ်း၏ ရည်မှန်းချက်ကို အကောင် အထည် ဖော်နိုင် ခြင်း မရှိသေးပေ။
Posted by justfreeman at 11:25 1 comments
အဆိုတော် အေးချမ်းမေကို မြန်မာပြည်တွင် ပိတ်ပင်
Friday, 25 December 2009 18:07 သဲသဲ
.နာမည်ကြီး အဆိုတော် အေးချမ်းမေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားပြီဟု ပရိသတ်တချို့က ယူဆနေကြချိန်တွင် အေးချမ်းမေနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများမှာ မြန်မာ စာနယ်ဇင်းများတွင် ပိတ်ပင် ခံနေရသည်။
လူကြိုက်များသည့် သူ၏ သီချင်းများကိုပင် ခေတ်စားနေသည့် FM ရေဒီယိုများတွင် ထုတ်လွှင့်ခြင်း မပြုရန် အာဏာပိုင်တို့က ပိတ်ပင်ထားကြောင်း ရန်ကုန်မှ ပေါ့ပ်ဂျာနယ်တစောင်၏ အယ်ဒီတာချုပ်က ပြောသည်။
“အေးချမ်းမေက Black list ထဲမှာ ပါနေတယ်။ ဘာကြောင့် ဆိုတာ အသေအချာလည်း မသိရဘူး” ဟု အဆိုပါ အယ်ဒီတာချုပ်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင် သွားပြီဟူသော ကောလာဟလမှာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်က အေးချမ်းမေ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ချိန်မှ စတင် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“အဲ့ဒီတုန်းက ဂျာနယ်တိုက်ကို ပရိသတ်တွေက ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်နဲ့ ဆက်မေး ကြတာ မနည်းဘူး” ဟု သူက ရှင်းပြသည်။
အေးချမ်းမေက ထိုကောလာဟလကို၂၀၀၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက ပြုလုပ်သည့် ၀ါရှင်တန်ရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ရန်ပုံငွေ ဖျော်ဖြေပွဲတခုတွင် ပါဝင်ဆင်နွဲခြင်းဖြင့် စတင် ချေဖျက်လိုက်သည်။
တေးဂီတလောကနှင့် ၈ နှစ်ကြာ အဆက်ပြတ်ပြီး နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်သည့် စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲ ဖြစ်သည်ဟု အဆိုတော် အေးချမ်းမေ၏ အစ်မဖြစ်သူ နော်လယ်ဖောက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“သူ့ရဲ့ ခံစားချက်က အသက်လည်း နည်းနည်းရပြီ ဆိုတော့ ဘုရားသီချင်းတွေ ဆိုချင်တာပေါ့နော်၊ အဲ့ဒီက သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် မေတ္တာနဲ့ ဆိုပေးခဲ့တာပါ” ဟု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင်သော နော်လယ်ဖောက ဆိုသည်။
ထိုဖျော်ဖြေပွဲကို Youtube နှင့် အင်တာနက်စာမျက်နှာ အများအပြားတွင် တွေ့နိုင်သည်။ သီဆိုမှုမစတင်မီ အေးချမ်းမေက “သေရွာပြန် အေးချမ်းမေပါ” ဟု ပြောပြီး ၎င်း၏ နာမည်ကြီးခဲ့သော “သူသိသွားပြီ” ဟူသည့် သီချင်းဖြင့် ဖျော်ဖြေရာ ပရိသတ်များ တခဲနက် အားပေးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသော အေးချမ်းမေသည် “ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ” ဟူသည့် တေးစီးရီးဖြင့် နာမည်ကျော်လာသူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အတွင်း ကာလများသည် သူ၏ အအောင်မြင်ဆုံး အချိန်များ ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံသည် ထိုကာလများ၏ ဂီတအနုပညာလောကတွင် ရောင်းအား အကောင်းဆုံး တေးစီးရီး အဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
ထိုစီးရီးတွင် ပါဝင်သော “တစစီကျိုးပဲ့နေတယ်” သီချင်းက အေးချမ်းမေကို ထိပ်တန်းသို့ ရောက်ရှိရန် ပို့ဆောင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အများက သုံးသပ်ကြသည်။
ထိုသီချင်းကို ရေးစပ်ပေးခဲ့သူ တေးရေးဆရာ မင်းချစ်သူက “ရန်ကုန် ပန်ဒါ စားသောက်ဆိုင်မှာ သူသီချင်းဆိုနေတာကို စတွေ့ကတည်းက သူ့ရဲ့ ဆိုဟန်နဲ့ ပုံစံက ပရိသတ် လက်ခံနိုင်တယ်၊ သူ့မှာ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်လို့ ခံစားမိတယ်၊ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ သုံးသပ်ပြီးတော့ သူ့အတွက် သီချင်းတွေကို လုပ်ပေးဖြစ်ခဲ့တာ” ဟု ပြောပြသည်။
ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ နောက်ပိုင်းတွင် အေးချမ်းမေ၏ JV ၁၅၀၀၊ ချစ်သူနားဆင်ဖို့၊ ရင်ခွင်အခန်း၊ ရပ်တန့်လို့မရနိုင် စသည့် စီးရီးများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
အေးချမ်းမေ၏ သီချင်း အများအပြားကို သူ၏ ပရိသတ်များက YouTube အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် လွှင့်တင်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
Posted by justfreeman at 04:460comments
မြန်မာ အလုပ်သမားများ အတွက် အဆင့်မြင့် ပညာသင်ကျောင်...
ဝန်ကြီးဌာန မပြန်သော ဘောလုံးသမားများ အငြိမ်းစားပေးမ...
မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းတွင် အနောက်တိုင်းတူရိယာများ မသု...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာအပါအ၀င် တောင်းစားသူများကို...
စစ်အစိုးရက (၂) နှစ်သက်တမ်း ငွေတိုက်စာချုပ်များ ထပ်...
ဦးဥတ္တမ နှစ် ၁၃၀ ပြည့်နေ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပတွင် ကျင်...
မြစ်ဆုံရေလှောင်တမံ စီမံကိန်းအတွက် ဒေသခံများကို နေရ...
အမှိုက်ပစ်ရာတွင် စည်းကမ်းမရှိသူများကို ရန်ကုန်တွင် ...
အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ထပ်မံတိုးချဲ့မည်...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူ ထောင်တွင်း၌ ကွယ်လွန်
ခရစ်စမတ် အထိမ်းအမှတ် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပမည်
ပြည်တွင်းဖြစ် ဂျစ်ကားထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်း
နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ရာထူး အပြောင်းအရွှေ့မျာြး...
နိုင်ငံခြားသားများကို ယခုနှစ် နာဂပွဲသို့ သွားခွင့်...
အနှိပ်စက် ခံရသူများဘက်မှ သက်သေထွက်သည့် အလုပ်သမများ...
ရိုဟင်ဂျာများ ပြန်လက်ခံရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တိုက်တွန်း...
HIV ကလေးများ ရန်ပုံငွေ ကဗျာရွတ်ပွဲ အင်းလျားကန်စောင...
တရုတ်ဒု-သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း သဘောတူညီချ...
ရတနာပုံ သတင်းစာဝန်ထမ်းများ အလုပ်ပြုတ်
ပဲခူးတိုင်း မတ်ပဲစိုက်ခင်းများ ထက်ဝက်ခန့် အပင်မပေါ...
ဂျီအက်စ်အမ် ငွေဖြည့်ကတ်စနစ် စတင်မည်
အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင် (၃) ဦးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
စီးပွားရေးပညာရှင် စတစ်ဂလစ် နေပြည်တော်တွင် ဆွေးနွေး...
ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းအတွက် တရားဝင် နယ်စပ်...
ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် ဒေါ်အောင်ဆ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေများတွေ့၊ အဖွဲ့ချုပ်...
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် သူဌေးကြီးများ စည်းရုံးနေ
တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ကျဆ...
ဒီဇယ်ပီပါများ ဆိပ်ကမ်းဝင်မည့်သတင်းကြောင့် ဒီဇယ်ဈေ...
ကိုကိုးကျွန်းသို့ ဒုတိယခရီးစဉ် ထပ်မံပြေးဆွဲမည်
အရောင်းစင်တာများ မြို့တော်ဝန်အမိန့် မလိုက်နာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဂါရ၀ပြုရေးအစီအစဉ် ဦးအောင်ရွှေထ...
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် A(H1N1) တုပ်ကွေး စတင်ရောက်ရ...
နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုနှင့် ၁၉၉၁ ကျောင်းသား လှုပ်ရ...
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ ဘိန်းစိုက်ပြီး လက်နက်ဝယ်နေဟ...
မြောက်ကိုရီးယား လေယာဉ်ပါ လက်နက်များ ဘန်ကောက်တွင် ဖ...
ပိတ်ပင်ထားသည့် စားသုံးဆီများ မြန်မာပြည်တွင်း ပြန်လ...
ဈေးပေါသည့် စီဒီအမ်အေဖုန်း လျှောက်လွှာတင်သွင်းသူ မျ...
မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်ကို ဦးပိုင်လီမိတက် လွှဲပြောင်းယ...
ဗေဒင် ယတြာ အားကိုးမှု ပိုတိုးလာနေ
ဝတပ်ဖွဲ့၏ မြို့နယ်တောင်းဆိုချက် ကန့်ကွက်စာများ လျှ...
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း စတင်ကောက်ယူ
အိန္ဒိယရော့ခ်ဂီတပွဲတော်တွင် အင်ပါယာအဖွဲ့ ပါဝင်ဖျော်...
ပန်းချီနေမျိုးဆေး၏ “ရှေး တခေတ်တခါက အမျိုးသမီးများ”...
ဝတပ်ဖွဲ့ဗဟို၏ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် အောက်ေ...
အရန်မီးသတ်များကို လက်နက်ငယ် သင်တန်းပေး
ဘိုကလေးမြို့ ကျေးရွာ (၂) ရွာ၌ အန်အယ်လ်ဒီ အ၀ီစိတွင်...
ပလတ်စတစ် လုပ်ငန်းရှင်များ အမှိုက်သိမ်းရမည်
“ တစညပါတီ အလိုမရှိ” ပိုစတာကပ်သူများ အဖမ်းခံရ
ပြည်သူများ ညီညွတ်ပါရန် ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော မှာကြား